Recent Posts | Crypto Gator | Iyo Yakanakisa Cryptocurrency, Blockchain uye Forex Nhau Aggregator
Forex Kutengesa Nhau 0
Yakanakisa ZuluTrade Forex chiratidzo chinotevera chikuva ongororo
Zvemari & kutengesa kweaseti ndeyekugara-kureba kubatanidzwa, iko iko iko kutenga uye kutengesa kwemari midziyo mumhando dzakasiyana-siyana uchishandisa otomatiki maturusi uye tekinoroji. ZuluTrade ndeimwe yemapuratifomu-akawanda ekutengesa mapuratifomu anopa kuwanda kwemakopi ekutengesa ekutengesa mu forex, indices, macrypto mari emasheya & musika wemari yemadhora.
Kuteedzera kutengesa iko kuita kwekuti vatengesi vanoteedzera mabasa evanoziva vatengesi mukati memisika yemari kuti vawane mhedzisiro yakafanana mukutengesa. ZuluTrade inopa otomatiki otomatiki enzira idzi dzinoperekedzwa nemaitiro emhinduro uye kugovana ruzivo. Kubva nhasi, ZuluTrade yakaunganidza vatengesi vanopfuura miriyoni nemari yekutengesa inodarika mazana masere emadhora.
ZuluTrade Background Nhoroondo
Nhoroondo iyi iri kuuya pazvidimbu zvezvikumbiro zvakakurisa nevadikani vechiZulu munzvimbo yemari. Zulu Trade yakavambwa imwe nguva mu2007 naLeon Yohai naKosta Eleftheriou. Chinangwa chega chaive chekuvaka chikuva chekutengeserana icho chinobvumidza mushe kopi yekutengesa, muna2009 kambani yaive yatove nevanopfuura zviuru mazana mana nemazana mashanu vatengesi vehunyanzvi vachipa masaini uye kuteedzera mapotifoliyo ekutengesa. Kutengeserana kwechiZulu muna4,500 kwakawedzera maficha senge Zulu Guard uye rutsigiro rwevatengi pamwe, yakabva yaenderera mberi nekudyidzana neSpotOption kugadzira mabhainari ekutengesa sarudzo. Kutengeserana kwechiZulu kwakave nekubudirira kunoshamisa muna 2014 izvo zvakazopedzisira zvaiwana mubairo (rezinesi reEU portfolio manejimendi) kubva kuEuropean Union, izvi zvakaunza Zulu trade kunzvimbo yepasi rose, munhu wese akaona kuve kwayo uye mikana.
Sangana neZulu Zulu Platform
Kana zvasvika pakutengesa pane iyo Zulu yekutengesa chikuva kubudirira kwemutengesi kunoenderana nekukwanisa kwake kuona & kuteedzera matekiniki evatengesi nyanzvi papuratifomu. Zulu yekutengesa chikuva haisi ponzi yekumisikidza chikuva chevanhu vane fungidziro 'yekufuma nekukurumidza' mafungiro, zvinokwanisika kuona nyanzvi mutengesi achitengesa & kugadzira mamirioni svondo rino otanga kurasikirwa vhiki rinouya asi hazviite nenzira ipi neipi kuzvidza kubhadharira kwemaZulu bhizimusi chikuva, zvese zvaunoda kuti uite semushambadzi kuita yako tsvagiridzo uye uwane angangoita maviri kana matatu akanyatso nyanzvi vatengesi vane makore anodiwa echiitiko (makore mana kana mashanu).
Iyo yekutengesa chikuva ine sarudzo dzekutengesa mabhinari sarudzo, forex, masheya uye zvigadzirwa zvinokosheswa semafuta & maindices seNASDAQ. Iwe unowana mukana wekutengesa idzi sarudzo uchishandisa nzira dzekutengesa dzevatengesi nyanzvi.
Iyo chikuva chakakamurwa muzvikamu zviviri:
(Chikamu A) Vanopa masaini: Ivo vatengesi vane hunyanzvi vanogovana mazano avo nevateveri uyezve muripo unoenderana nekubudirira kwemaitiro avo.
(Chikamu B) Vateveri: vanogona kunge vasiri vatengesi vane hunyanzvi asi vanogona kuteedzera matekinoroji evatengesi vehunyanzvi uye portfolio (mazano) evamwe vateveri vangangodaro vakawana nhanho dzebudiriro vachitengesa.
Nekuda kwekuzvipira kwenguva refu uye kusagadziriswa kwevatengi basa rekushandira Zulu kutengeserana kwawana BrokerNotes katatu AAA chiyero chekutsigira
Zvimiro zveZulu Kutengesa Platform:
(1) Inopararira & maKomisheni
Vatengesi vanowanzo tarisa kune ino ficha nekuti inosarudza yavo yekutora-purofiti vachitengesa. Iyo broker inobhadharisa komisheni yekutengesa kwese kuwedzera kune yatovepo kupararira kwakajairika asi maakaundi evatengesi ane hukama neZulu bhizinesi chikuva anozobhadhariswa zero Commission na Zulu indigenous broker (AAAFx).
Kuparadzira muzana kana mitengo (mutsauko pakati pekutenga & kutengesa mutengo) zvinopihwa nevatengesi vakasiyana; zvisinei mhando yemari mbiri uye nguva yekutengesa zvakare inogona kukanganisa kupararira kureva kuti kupararira kunowedzera kana paine musika wepamusoro kusagadzikana uye kunoderedza kana paine kushomeka kwemusika kushomeka.
Sevane ruzivo neramangwana vatengesi munzvimbo dzepakati pekutsinhana kwekrispto ndinozviona zvichitovaraidza kuti kutengeserana kweZulu kunopa maitiro akasarudzika mukutengesa. Ichokwadi ndechekuti kuwedzera kune mukana wekuwedzera mihoro pamwe nekuderedza mihoro; zvisinei, zvinogara zvichikosha kuziva kuti kushandisa mwero wepamusoro (1: 1000) zvinoreva kumahombekombe epasi, izvo zvinowedzera mwero wemahara uye margin yemahara, kunyangwe izvi zvichizotungamira mukuwandisa, kudhonza account uye pakupedzisira kumira. Saka iwe unogadzirisa njodzi iyi zvirinani kana iwe uchitengesa uchishandisa 1: 100 reji.
(3) Mari dzekutengesa:
Nzvimbo yega yega yekutengesa ine mari yayo yekutengesa uye Zulu yekutengesa chikuva haisi iyo yakasarudzika, pane chikonzero chekuti iwe uzive nezve imwezve mari inouya nekutengesa pa Zulu chikuva, mari inobhadhariswa inoenderana neyakatengeswa mari mbiri, kunyange hazvo mari idzi dzisiri dzakamira vanocheka kuita purofiti nguva nenguva uye vatengesi ve intraday havabhadhare mari idzi.Hakuna imwe mari yekuwedzera padivi peizvo zvataurwa pamusoro, kunyangwe nyanzvi vatengesi vamunoteedzera vanobhadharwa zvakananga nekutengesa kwechiZulu kubva kukomisheni yekutengeserana Pane chikonzero chekuti iwe uzivewo kuti kutengeserana kwechiZulu kunopa zvakawanda maererano nemabhonasi edziviriro uye kukwidziridzwa uye nekudaro kushanyira mawebhusaiti ekutengesa eZulu nguva nenguva kuchakupa mukana uye nekuwana mikana yakadaro yekumwisa-muromo.
Zulu Trade inonzwisisa iko zvino kuparara kwepasirese uye saka ine yakaderera shoma dhipoziti inodikanwa. Iyo shoma dhipoziti inodiwa nevatengesi mukati meZulu bhizimusi chikuva chikuva kubva pa $ 1, £ 210, $ 300, 300 AUD, € 250 kusvika 25,000 JPY zvichiteerana.
(5) Nyika dzinogona kushandisa kutengeserana kwechiZulu:
Zulu Trade papuratifomu haisi kungokura mune kukosha kwayo zvirevo asi iri kukurawo munzvimbo dzenharaunda. Zulu inogamuchira vatengesi vanobva kuUnited Kingdom, United States, Canada, Singapore, Hong Kong, Germany, Norway, Italy, Qatar, Sweden, Australia, South Africa, Denmark, Saudi Arabia, Luxembourg, Kuwait nedzimwe nyika dzakawanda.
Zulu Trade platform maneja vanonzwisisa vanokwikwidza uye makopi mukati mekutengesa nzvimbo uye saka zvakafanira kuti iwe uzive zvimwe zvehunyanzvi hwekutengesa kweZulu.
Pros dzekushandisa Zulu Trade Platform
(1) Yevashandisi-inoshamwaridzika yekutengesa interface iyo inogona kumisikidzwa-mukati munguva pfupi kwazvo.
(2) Kugona kusarudza yemukati kana yekunze broker: Zulu kutengeserana ine yayo yemuno broker (AAAFX) iyo inobhadharisa yakaderera kwazvo komisheni fizi asi iwe unogona zvakare kusarudza mumwe wekunze broker wekutengeserana naye.
(3) Wide akasiyana evatengesi: nekuti zvese ndezvekutengesa kopi, iwe unoda yakawanda yevatengesi vehunyanzvi kuti vatevere uye vagadzire sarudzo yakanaka, kuti ugone kutevedzera vatengesi 5-10 kana kunyangwe asi zvinogara zvichikurudzirwa kuteedzera manhamba iwe unonyatsogutsikana nazvo nekuti kutevera vatengesi makumi maviri kusvika makumi mana kunogona kuita kuti iwe utapurike kune vashoma vevatengesi.
(4) Kutengesa nezvinhu zvakasiyana: Kutengeserana kwechiZulu kune mabasa akawanda nekuti unogona kuchinjanisa pamari dzakasiyana dzinosanganisira cryptocurrencies uye kunyange zvigadzirwa.
(5) ZuluRank ndechimwe chinhu chakasarudzika chinomirira vatengesi vane hunyanzvi kuitira kuti vateveri vagone kuona vatengesi vakanaka & kuita sarudzo dzavo.
(6) Vanopa masaini vane nzira dzakasiyana dzekuwana.
(7) Zvemagariro zvekutengesa zvinopa mukana wekuita nevamwe vatengesi, zvinoita kuti kugovana ruzivo kuve nyore.
(8) Yakazvitsaurira kopi kopi yekutengesa sevhisi inopa mukana wakazonaka wevanofarira crypto kuwana rake purofiti.
Cons of Zulu Kutengesa
Zvinotevera ndizvo zvimwe zvezvakaipa zveZulu Trade Platform.
(1) Ine nzira shoma dzekubhadhara.
(2) Kuva mupi wemasaini kunogona kuve kwakaomarara.
(3) Zulu chinzvimbo chealgorithm ichiri chisina kunyatsojeka nevatungamiriri vane hunyanzvi.
(4) Zvemagariro zvekutengeserana maficha achiri akakosha.
(5) Iko kushandiswa, kuwanikwa & sarudzo ye crypto-assets kunoonekwa neasarudzo yevatengesi kwete neyaZulu yekushambadzira chikuva.
Ndataura zvese izvi, ndinogona kutaura nechivimbo izvozvo Zulutrade.com inopa pfungwa dzinotyisa dzekutengesa sarudzo kune ese shades evatengesi (vane ruzivo uye vasina ruzivo). Iyo mushandisi base iri kukura nekumhanya kwechiedza, kunyangwe iine mushandisi-inoshamwaridzika yekutengesa chikuva, zvirinani, zvakachipa uye zvinobatsira zvakanyanya kutengeserana neyemuno broker (AAAFx). Kutengesa purofiti kuri nyore kana iwe uine hunyanzvi uye nepuratifomu yakakodzera yekuvandudza hunyanzvi hwako, Zulu yekutengesa chikuva inoona kuti purofiti iri yechokwadi uye yakajeka.
By Crypto Gator Posted on 2 ago
Nongedzo Yakareruka Kune Forex Kutengesa
pano pa CryptoGator, tinoita kukoshesa Crypto Dzidzo uye kuita kuti vaverengi vedu vazive nezve nyika yezvemari.
Musika wekuchinjana kune dzimwe nyika unowanzozivikanwa se Forex musika inzvimbo inotengeswa mari (kutenga nekutengesa). Kazhinji, vanhu pavanofamba-famba pasirese, pane chikonzero chekuchinjana mari kuti vakwanise kuita zviitiko zvebhizinesi mukati memunyika mavo. Iyi nzira yekutsinhana kwemari inonzi yekushandura kwekunze uye inonyanya kuitiswa mumusika wekuchinjana kunze kwenyika.
Chinhu chimwe chinoita kuti musika wepamberi ushamisike ndeyekuti hapana musika wepakati wekutengesa mari. Izvo zviri nani kutengeswa zvemagetsi kana kuitiswa pamusoro-the-counter (OTC). Vatengesi vanoita zvese zvekushambadzira kuburikidza nekombuta network pane kuchinjisa kwepakati.
The Forex musika yakavhurika yekutengesa maawa makumi maviri nemana pazuva, Muvhuro kusvika Chishanu nemari inotengeswa pasirese munzvimbo hombe dzemari dzeLondon, Hong Kong, Singapore, New York, Paris, Tokyo, Zurich, Frankfurt, Sydney, uye nharaunda dzinenge dzese nguva.
Icho chirevo ndechekuti kupera kwezuva rekutengesa muUnited States ndiko kutanga kwezuva rekutengesa muHong Kong neTokyo. Musika wepamberi unoramba uchishingaira chero nguva yezuva nekungogara uchichinja mitengo yemitengo
Zviitiko Zvinofambisa Iyo Forex Msika
Mapoka Evanhu Vanotengesa Iyo Forex Msika
Mazwi Akakosha Ekucherechedza Paunenge Uchiita Neiyo Forex Msika
Makomborero Eiyo Forex Msika Pamusoro Pevamwe Vemari Masoko
Mukuita, zvinhu zvakawanda zvinogona kubatsira mukukonzera shanduko mumitengo yemari mu FX misika. Chero bedzi zvinhu izvi zvichiramba zvakakosha mukufamba kwemusika, vatengesi vari kutsvaga zvinhu izvi kana vachiita sarudzo dzekutengesa.
Izvi zvinhu zvinokomberedza zviitiko zve macroeconomic senge kusarudzwa kwemutungamiriri wenyika, kana zvimwe zvinhu zveupfumi senge huwandu hwechikwereti huripo, kushaikwa kwemabasa, GDP, chikwereti kuGDP ratio uye inflation, nezvimwe. Vatengesi vazhinji vepamusoro vanotora Economy calendar kugara pamusoro pezvinhu zvine chekuita nezve zvakakosha kuburitswa kwehupfumi kunogona kutamisa musika.
Chero ani anotengesa iyo FX misika zvingangowira mumapoka maviri: maHedger uye maSpeculators. Kunyangwe izvi zvikamu zviviri zvevatengesi zvichiramba zvakakosha kumusika, basa ravo, kukosha, uye chinangwa chekutengesa iwo musika unoramba wakasiyana kubva kune mumwe.
MaHedger anogara achitarisa kudzikamisa mafambiro akanyanyisa muyero yekutsinhana. Iri zano rinoshandiswa nevakuru vemakongamendi vakaita seTotal, Dangote, uye maAmazon anotarisa kudzikisira kufambiswa kwavo nekufamba kwemari yekunze.
Padivi rerutivi, Vafungidziri vari kutsvaga nenjodzi uye vanogara vachitsvaga kutora mukana wekusagadzikana mukuchinjana mitengo yezvimwe zvakanaka zvakawanikwa. Aya mapoka evatengesi anosanganisira makuru ekutengesa madhesiki kumabhangi makuru uye vatengesi vezvitoro.
Mari yepasi: Paunenge uchitora mari yemari, iyi ndiyo mari yekutanga inoonekwa. Tichitarisa EUR / USD, mari yepasi ndiyo Euro.
Variable / quote mari: Iyi ndiyo mari yechipiri mune yakataurwa mari peya. Panyaya ye EUR / USD, iri iyo US Dollar.
Bhidhi: Mutengo weBid ndiwo mutengo wepamusoro mutengi (mubhadhari) anogona kubhadhara. Uyu ndiwo mutengo wauchazoona iwe paunenge uchiedza kutengesa peya yepawiri, kazhinji kuruboshwe rwechikumbiro uye kazhinji kazhinji mutsvuku.
Bvunza: Uku ndiko kusarudzika kweBid odha uye inoratidza yakaderera yakapihwa mutengesi akagadzirira kubhadhara. Uyu ndiwo mutengo waunogona kuona kana iwe uchiedza kutenga peya yemari, uye zvinowanzo kuve kurudyi uye nebhuruu.
Paradzira: Uku ndiko kusiyana pakati pebidha nemutengo wekupa, kunova ndiko kupararira chaiko mumusika wepasirese, pamwe nekupararira kwekuwedzera kweye broker.
Kuwedzera: Kuwedzera kunoita kuti zvive nyore kuti vatengesi vatengese zvinzvimbo nekungopa chete muzana yezve kukosha kwekutengeserana. Izvi zvinobatsira vatengesi, nemari yakati wandei, kushandisa zvinzvimbo zvakakura. Kuwedzera kunowedzera purofiti uye kurasikirwa.
Mapipi / Peresenti muPoint: A Pip inoenderana neshanduro imwechete yedhijitari Mune yechinomwe decimal chinzvimbo mune yakataurwa-vaviri. Aya zvakare marongedzero anoita vatengesi mune vaviri vaviri mari. Semuenzaniso, nhasi, iyo GBP / USD yakawana zana mapoinzi.
Liquidity: Mari yemari inonzi mvura chete kana ichigona kutengwa nekutengeswa nekukasira sezvo vaviri vemari vakatsinhaniswa kana kutengeswa nevanoverengeka vatori vechikamu.
Margin: Iyi ndiyo huwandu hwemari inodiwa kuti uzarure akakweretesa account uye ndiwo mutsauko pakati pechinzvimbo chako chakanyanya kukosheswa uye mari yavatengesi yakakweretwa kwauri.
Kudana kweMargin: Kana mari yacho yose yaiswa, pamwe kana kubvisa chero mibairo kana kurasikirwa, inodonha pazasi pehuwandu hwakatsanangurwa (margin chinodikanwa), kufona kumahombekombe kuchakonzerwa izvo zvinoita kuti mutengesi awedzere imwe mari kutsigira nzvimbo yakavhurika.
Yakaderera kutengeserana mutengo: Mukuita, vatengesi vepamberi vanoita mari yavo kubva pakupararira uye mari yemari inobhadharwa husiku pane wekutengesa. Kana ichienzaniswa nedzimwe misika yezvemari senge yemusika wezvinhu, iyo komisheni inobhadharisa pamabhizimisi eFX yakaderera zvakanyanya nekuda kwekupararira kudiki mumari yemari.
Yakaderera Inopararira: Nekuda kwemari yakawanda mumakuru makuru eFX akaita seUSD, EUR, JPY, iyo Bhidha / Bvunza kupararira yakaderera kwazvo kune aya mairi. Mukuita, kupararira ndicho chipingamupinyi chekutanga chinofanira kukundwa kana musika uchifamba uchifarirwa nemutengesi. Mushure mekufamba pamusoro pekupararira, chero mapipi ekuwedzera anofamba mukufarira kwemutengesi anonyorwa sepundutso.
Kuwedzeredza Kutengesa: The Forex musika musika wepamusoro wekusimudzira, izvi zvinoreva kuti vatengesi vanobhadhara chete chikamu chemutengo wese unodiwa kugadzirisa bhizinesi. Izvi zvine mukana wekuwedzera zviwanikwa kana kurasikirwa. Izvi zvinobatsira zvakanyanya kune vane ruzivo vatengesi vanotarisa kuita zvakanyanya kubva pamusika.
Forex Trading unogona kunge uri basa rinotyisa uye rinotyisa kune vatengesi vatsva vasina kumbobvira vaoneswa nzvimbo yakaoma yekutengesa, yakaoma, uye mvura.
Zvisinei neakakura uye akazara maturusi edzidzo, magwara, dzidziso, mavhidhiyo, uye zvimwe zviwanikwa zviripo pa internet, uye zvinopihwa nevatengesi, vanotanga vanogona kunge vari munzira yekuita purofiti huru kuburikidza Forex Trading.
Zviwanikwa uye maGuides 0
Webhu Yekubata Kuongorora: InterServer
Usati watanga rwendo rwako mukuvaka webhusaiti yehunyanzvi, imwe yesarudzo dzakaomesesa dzauchazofanira kuita ndiko kusarudza kwewebhu yekubatira masevhisi shamwari. Kazhinji, zvinhu zvakawanda zvinokanganisa sarudzo dzakadai, asi kunamatira kune yekubatira sevhisi inosangana zvakanyanya nezvako zvakatemerwa zvinotariswa senge zviri nani.
Kugadzika kune chaiyo webhu inomubatsira mupi hapana mubvunzo basa rinotyisa. Kusarudza iyo chaiyo webhu inomiririra masevhisi mupi chinhu chakakosha kuita kuti uwane yakanakisa yekuteerera chiitiko pawebhusaiti yako.
Sarudzo yako yewebhu inomiririra mupi inoenderana zvakanyanya nezvinodiwa newebsite, vateereri vako, kwavanowanikwa uye ndezvipi zvemukati zvauri kuronga kuitisa kuti uendese kune vako vateereri. Semuenzaniso, kana mumwe achivavarira kuburitsa blog blog kana magazini yepamhepo vangangoda masevhisi asinganetsi kuenzaniswa nemunhu arikuronga kuvhura webhusaiti paunoburitsa mavhidhiyo emhando yepamusoro kupa pawebhusaiti yako. Iyo yekupedzisira inounza akawedzera matambudziko sekushandisa kwe Zvemukati Dhirivhari Networks (CDN), Nzvimbo Dzinowanikwa nezvimwe kusangana nezvinodiwa pawebhusaiti.
Kuita sarudzo kunogona kuvhiringidza zvakanyanya kunyanya kana ukapihwa nemakumi ezviuru zvezvisarudzo zvekusarudza kubva. Muchirongwa ichi, tichave tichidzikisa tarisiro yedu ku InterServer webhu yekubata sevhisi ine yakazara maonero mamwe emamwe masevhisi akasiyana anopihwa neInterServer. Kunyangwe iwe uri kutarisa pachiyero C-pani yekubata kana kuburitsa kunze Ecommerce chikuva, isu takakufukidza.
Sarudzo yekuongorora InterServer zvinoenderana nemukurumbira mamakisi avakaunganidza kwemakumi emakore apfuura ivo vange varipo: kwavo kusununguka-kwe-kuwana, chengetedzo, uye kuvimbika kwenetiweki. Ngatisvetukei kuti tiwane zvimwe.
InterServer Webhu Kubata
Wepamusoro Zvimiro zveInterServer
State-of-the-art Kuchengetedzwa Kwekuvaka
Unlimited Domains uye Webhusaiti
Kumusoro Kumhanyisa Kusvika Kusvika 522 ms
Yemahara Email Services
Wepamusoro Vatengi Sevhisi: 24/7 Live Chat Chat
Unlimited Kuchengetedza Space
Unofanirwa Kufunga nezveInterServer?
InterServer ndeimwe yekutanga webhu inomiririra vanopa avo anga aripo kwemakumi mashoma emakore izvozvi. Kubva 1999, InterServer yanga ichipa masevhisi kune iri kuwedzera musika wepasirese ichiita iwo makore makumi maviri nemana ehunhu hwekuendesa basa kusvika-nhasi. InterServer yakasarudzika yakasarudzika pakati pevakwikwidzi vayo yekupa yese-mu-imwe chiitiko chebasa kune vashandisi vayo. Pamusoro pezvekugovana zvekubata masevhisi zvinopihwa neInterServer, ivo zvakare vanopa gore rekutora uye nekukurumidza maseva
Pamusoro pezvo, ivo vanopa colocation services kune vatengi vanozosarudza kutora yavo varidzi venyama. InterServer inopa dzakasiyana siyana zvirongwa zve server izvo zvinouya neakawanda suite yezvinhu zvakagadzirirwa kubatsira kugadzirwa uye kugadzirisa kwewebhu webhusaiti nekukurumidza.
Iyo inozivikanwa yekutambira server yakavakirwa kugutsikana kwevatengi. Nzvimbo ina dzedhata dzekambani dzese dzinoitirwa muUnited States, sevashandisi veAmerica vakadaro vanogona kukurumidza kumhanya uye kugutsikana kuri kuita sevhisi.
InterServer yakaunganidza mukurumbira wakanaka mumakore apfuura ayo akwezva vatengi vepamusoro, kubva kumabhizimusi madiki kumakambani eFortune 500. Nhasi, Interserver izita remhuri rinomira pese panodomwa webhu yekubata masevhisi.
Kuchengetedza ndiko kuchave kwako kwekutanga kukoshesa kana iwe uchishuvira kuchengetedza yega yega ruzivo rwunopinda muwebhusaiti yako. Nemamirioni emafaira akaipa pa internet, chengetedzo chinhu chakakosha kwazvo. InterServer inopa zvese zvaunoda kuti uvake ironclad yakachengetedzwa webhusaiti, kubva pakupa zviwanikwa zvakakosha kuti unzwisise zvizere kuchengetedza webhusaiti maficha, kukupa iwe chaiyo maturusi ekuti zvinhu zviende.
Iyo Server InterShield Kuchengetedza Firewall inoshandisa kudzidza kwemuchina kupa chengetedzo yepamusoro kune vatengi, nekudaro ichivharira nekudzivirira kune vanorwisa zvine utsinye. Iyi ficha inowanikwa pane ese mapurani nekutadza.
Kuchengetedza 2 dura rekuchengetedza protocol, vashandisi vanooneswa kune ModSecurity maturusi ayo anopa imwe nhete ye firewall kudzivirira pamwe chete neInterSheild uye unogara uchiongorora madhiraivha ekugashira mafaira ekufungidzira kana akaipa
Imwe yematambudziko anowanzo sangana nawo ndeye muganho kune huwandu hwenzvimbo uye mawebhusaiti ayo anogona kugadzirwa neakapihwa sevhisi yekugamuchira. Kutarisana nedambudziko iri, ungangodaro wakamanikidzwa kana iwe waizogadzira imwe diki diki webhusaiti muma subdomains kana akasiyana webhusaiti.
Mune mamwe mamiriro akaoma, iwe unogona kunge usingawani kuzere kune dhatabhesi dzinodiwa kuisa WordPress zvemukati. InterServer yakasarudzika yakasarudzika mukuendesa kwayo sevhisi sezvavanodzora ichi chipingaidzo, ichipa vashandisi nayo nzvimbo dzisingagumi pamawebhusaiti. Nezvinhu izvi, vashandisi vanogona nyore kuwana avo ese mawebhusaiti uye subdomains pasi peimwe server, zvichiita kuti zvive nyore kuvaka uye zvakanyanya kuitira kuchengetedza.
Vashandisi vanogona zvakare kuve yavo uye nekushandisa rakakura nhamba dhatabhesi sezvavanoda. Iyo domain maneja zvinoita kuti zvikwanise kuwedzera, kubvisa, uye kugadzirisa mamwe madomeni zvakasiyana, zvichiita kuti zvikwanise kumhanya yakazvimirira mawebhusaiti. Pamusoro pezvo, InterServer yakagadzirirwa zvakanyanya kurerukirwa-kwe-kuwana, zvichiita kuti zvive nyore kune vashandisi kuti vafambe nenzira nyore nyore kuburikidza nemadhata zvisina tsarukano. Kune nguva dzose kupihwa rubatsiro rwekuwana rubatsiro kuburikidza nevatungamiriri vedu vanowanikwa 24 × 7 kupfuudza mamwe emabasa enguva dzose akadai sekuronga mabhakiti, kuiswa kweOS, zvigadziridzo zvekukwirisa kwenetiweki uye maprotocol ekuchengetedza.
Padhuze nekuchengetedzeka, kumhanya kunofanirwa kukwirisa kwakakwirira pakati pezvinhu zvekutarisira pakusarudza yekutambira sevhisi. Iwe uri mukana wekunyora a yakakwira bounce mwero kana webhusaiti yako ikatakura zvishoma nezvishoma sevashanyi vanozoona zvichinetsa kufambira mberi, nekudaro ivo vanozosiya mushure mekushanyira peji rekutanga.
InterServer yakufukidza, kana zvasvika kune network network! Ndiine avhareji kumhanya kwe522 ms, InterServer inopa kumhanya kwakanyanya kune varidzi vewebhusaiti, ichipa chiitiko chinofadza.
InterServer inonzwisisa kukosha kweiyo-inomhanya internet, nekudaro, vanga vachida kuvandudza kumhanya kwe server yavo mwedzi wega. Kubva data rakawanikwa, iyo webhusaiti kumhanya parizvino inogara pa522 ms, ichipesana ne494 ms yakanyorwa munaNovember 2019 ichiratidza humbowo hwekuenderera mberi kukura uye hwepamusoro kugutsikana kwevatengi.
Kuve neyako tsika email account yakakosha nhanho mukumakisheni maitiro ezvako zvigadzirwa uye masevhisi kana kunyangwe kana zvasvika pakubatanidzwa neiyo chaiyo CRM yevatungamiriri chizvarwa. Kuwana sevhisi yekutambira iyo inopa-mumba-email sevhisi inobatsira kuvimba nevechitatu-bato email vanopa seGoogle Workspace (yaimbova GSuite) yeemail services.
Imwe yemamwe maficha evashandisi veInterServer pakupedzisira vanonakidzwa nhare dzemahara dzeemail. InterServer inopa mahara maakaundi eakaundi ese akagashirwa, zvichiita kuti mabhizinesi agadzire nyanzvi yemakambani email kuti ibatsire kuramba uchikurukura nevatove varipo uye vanogona kuve vatengi.
InterServer inokoshesa mutengi wayo, seizvi vanozvirumbidza neakanakisisa evatengi masevhisi. Kutaurirana ndihwo hupenyu hwehupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi uye hunokosha pane izvozvo, hunobatsira pakuzadzisa kugutsikana kwevatengi.
Mutengi anodzoka paInterServer anopindura mibvunzo yevashandisi mune isingasviki maminetsi mashanu, kugadzirisa nyaya munguva inokurumidza. Pamusoro peRarama Chat, vashandisi vanogona zvakare kugamuchira rubatsiro nekushanyira InterServers ' chizivo chezivo kana kusvika parutsigiro rwefoni, tikiti, uye email sarudzo.
ne InterServer, pamwe haufanire kunetsekana nezve saizi yekuchengetedza sezvo chirongwa chega chega chinouya nenzvimbo isingagumi yeSDD yekuchengetedza nzvimbo kusangana nezvinodiwa zvezuva nezuva online Iwe unenge usinga nyanye kunetseka nezvekudzikamisa saizi yefaira kana huwandu hweruzivo iwe hwauri kutora online. Uku ndiko kubatsira kukuru kwemawebhusaiti ane hunyanzvi ayo anoungana pamwe nekuchengetedza dhata hombe kana ruzivo zuva nezuva.
Zvichienderana neyakavimbika yavo rekodhi uye ruzivo rwevashandisi, Interserver inozivikanwa yekuratidzira yakasimba chengetedzo yekuvakisa inoita kuti ive nzvimbo yepamusoro yemazita emabhizinesi makuru pasirese. Yadzo yepamusoro yemutsetse chengetedzo zviyero, yepamusoro sevhisi sevhisi, inyore kushandisa interface uye yakakwira-inomhanya webhusaiti mutoro-nguva inoita kuti ive yakasarudzika uye yakakodzera sarudzo kune ese marudzi emawebhusaiti.
Pakupedzisira, iwe unenge ungangoda kunamatira nekambani yekutambira yewebhu iyo inopa risingagumi nzvimbo yekuchengetera pamwe nekuchinjika kana zvasvika pakutarisira subdomains muwebhusaiti yako. Kunyanya kana bhizinesi rako kana mubatanidzwa uri kutsvaga kuwedzera kwakasimba munguva pfupi iri kutevera.
Blockchain uye Cryptocurrency Nhau 0
Crypto neBlockchain Nhau Dzakakurisa: Vhiki yaDecember 10th 2020
Crypto Highlights: MicroStr Strategy inotenga mari yakawanda, India kumitero yemhindu, Dow Jones kuvhura crypto indexes, ETH Fund kutanga kuToronto stock exchange, Genesis Block inowana OMG: kune zvakawanda muvhiki ino yeCrypto Highlights.
Wepamusoro Crypto Misoro NaCrypto Gator
Nhau dzePamusoro dzeSvondo
3 makiyi metric ekuona sezvo Bitcoin mutengo uchiedza kumusoro $ 20,000
India Inoronga Kumutero Imari Kubva kuBitcoin Investment: Chirevo
MicroStr Strategy Inotenga Yakawedzera $ 50M muBitcoin
Iyi Svondo yeMusika Sentiment
S & P Dow Jones Indices Yekutanga Crypto Indexes muna 2021
Ethereum fund kutanga kuToronto Stock Exchange
Hong Kong OTC yekutengesa kambani inowana OMG Network
Crypto Zvinoratidza: MicroStr Strategy inotenga mari yakawanda, India kumitero yemhindu, Dow Jones kuvhura crypto indexes, ETH Fund kutanga kuToronto stock exchange, Genesis Block inowana OMG: kune zvakawanda muCrypto Highlights yevhiki ino.
Pano paCrypto Gator; Crypto Dzidzo uye zviitiko zvepamusoro zvakakomberedza indasitiri zvinoramba zviri chikamu chedu chekutanga kukoshesa kuitira kuti vaverengi vedu vazive uye vafarire. Yakawanda nyaya dzinonakidza mune ino svondo Crypto Zvakakosha.
Wepamusoro Crypto Misoro Na Crypto Gator
Sezvo Bitcoin iri kuramba ichitenderera yakatenderedza iyo 19k mucherechedzo, kune matatu akakosha mametric ekuchengeta ziso kune angangoita kuwedzera kana kuparara.
Vatatu vehutongi hwezvido zvevanhu vakatsigira bhiri raizoda vanopa solidcoin kunyoresa kuFederal Reserve uyezve kuwana rezinesi rebhangi.
Canadian dijitari yeaseti inivhesitimendi maneja ichavhura IPO svondo rino kuburitsa Ether Fund, iyo Ethereum yekutsinhana-yakatengesa kuvimba paToronto Stock Exchange (TSX).
Mufananidzo Wemusoro: AXX Chikoro
Sezvo Bitcoin misangano iri padhuze ne $ 20k mucherechedzo, vatengesi vari kuchengeta ziso rekugona kupaza pamusoro penzvimbo ye $ 19k kana kudonha. Iyo 20k dunhu iyo yakashanda senge yepamusoro kune yapfuura 2017 nzombe-mhanya yave kushanda senzvimbo yakakosha yepfungwa inodzivirira ine yakawanda yekutengesa maodha kuunganidzwa kutenderedza dunhu.
Vatengesi vanofanirwa kutarisa zvinhu zvakakosha kuti vaone zvinotevera zvinogona kuitika. Pamusoro pezvinhu zvekuchengetedza ziso pakupedzisira zvinotenderera: kutengeserana vhoriyamu, yakareba kusvika pfupi chiyero, uye kukwira muhuwandu hwemari. Kana vatengesi (zvikabudura) vachitsvaga yakakwidziridzwa, iyo mari yekubhadhara inowanzove yakaipa. Nekuda kweizvozvo, ivo vatengesi vachange vachibhadhara mari. Yakanakira tsika yekufungidzira kuti yakanyanya yakakwira mari rate inogona kureva kuti vatengesi vari kubheja pamusika downtrend.
Vazhinji vatengesi vanoteedzera vhoriyamu kuyambuka kuchinjana nzvimbo, yakaderera vhoriyamu inowanzo ratidza kushomeka kwechido kana chivimbo mumusika. Izvo zvinodikanwa kuti uchenjere nezveBitcoin ichityora yakakosha kuramba pane yakaderera vhoriyamu. Kufarira kwakanaka kunofanirwa kuperekedzwa nevhoriyamu yakanaka.
Vatengesi vanotsvagawo chiyero che "refu-kupfupika" mukutungamira kwekuchinjana. Ichi chiyero chinogona kuenda nenzira yakareba kuti uone kutungamira kwemusika mune vatengesi vari kubheja pa.
India Zvirongwa Kumutero Mari Inowanikwa Kubva Bitcoin Investment: Report
Nebudiriro ichangoburwa, vatengesi veIndia crypto kana vatengesi vaizofanira kutanga kubhadhara mutero pane purofiti yakaburitswa kubva kuma crypto holdings avo. Maererano ne The Economic Times (ET), India inonzi ichiongorora nekutsvaga vatengesi vekristpto avo vakaona zvakabudirira kubva kumusangano wekupedzisira we bitcoin, danho rakanangana nekuona mitero kubva pakudzoka kwakadai.
Chirevo ichi chiri kuti pamberi pekurambidzwa kwekristpto neReserve Bank muna Kubvumbi 2018, dhipatimendi remutero reIndia rakatora ruzivo nezvezvitengesi zve bitcoin zvakaitwa kuburikidza nemabhengi emabhangi panguva iyoyo. Kunyangwe kurambidzwa uku kwakabviswa imwe nguva muna Kubvumbi 2018.
Chirevo ichi chinowedzera kuti zviremera zviri kuongororawo zvakawanikwa nevatengesi vekristpto vachishandisa KYC / AML exchange inowirirana senge CoinDCX uye zvakare kushandisa PAN kadhi, gwaro rekuzivikanwa yenyika.
Kunyange zvakadaro, iyo pesenti inobhadharwa haisati yaziviswa asi nyanzvi zhinji dziri kuratidza kuti ingangoita 30% mutero pane zvakawana crypto. Vazhinji vatengesi varikurayirwa kuti vape maficha avo ekuwana mari semari inowanikwa pamwe nemasheya. Mune mushumo wepepanhau, Amit Maheshwari akataura izvozvo Bitcoin inoshanda kushambadzira inogona kubatwa sebhizinesi rekufungidzira uye nekudaro ichave iri pasi pemitero yakajairwa.
Michael Saylor's MicroStr Strategy inoramba ichinaka yeBitcoin sezvo United States bhizinesi rezvehungwaru bhizinesi rinodhonza imwe $ 50 mamirioni muiyo dhijitari aseti. Sezvakasimbiswa ari Tweet yakagadzirwa na CEO, iyo femu yakatenga angangoita zviuru zviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe neshanu emadhora makumi mashanu emadhora mumari zvinoenderana neHurumende yeHurumende, pamutengo uri pakati pe $ 2,574 pa bitcoin.
Ichitevera danho iri richangoburwa, iyo firm ikozvino inodada ne40,824 bitcoins yakazara. MicroStr Strategy yakatanga yatenga madhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora eBitcoin muna Nyamavhuvhu 250, ichiteverwa neimwezve yekutengwa kwemamiriyoni zana nemakumi masere nemashanu pamwedzi. Kutenga uku akaurayiwa neinotungamira US-based cryptocurrency exchange Coinbase.
Kubva zvazivisa danho rekutenga mamwe ma bitcoins mukupera kwa Chikunguru gore rino, iyo yakasimba stock (NASDAQ: MSTR) yakawedzera kupfuura 170%. Vazhinji vanhu ikozvino vanosarudza kudaidza iyo yakasimba iyo de-facto bitcoin yekuchinjana-yakatengeswa mari.
Nyowani Dhairekitori Mutemo weUS Uchaita Izvo zvisiri pamutemo Kuburitsa Stablecoins Pasina Federal Rchengetedza Kubvumidzwa
Chichangobva kukurudzirwa bhiri raunzwa nevatatu vemitemo vekuUS vari kunangana nestockcoin vanopa, bhiri iri rakaiswa pasi pevamwe vakazvimiririra solidcoin vanopa kuti vawane banking charter kana rezinesi uye zvakare kuwana mvumo kubva kuFederal Reserve vasati vagone kuburitsa solidcoins.
Bhiri iri rakaunzwa nevamiriri vatatu veDemocratic: Rashida Tlaib, nerutsigiro kubva kuna Rep. Jesús García naStephen Lynch. Iko kusimudzira kuchada kuti chero vapi veStockcoin vanopa vanofanirwa kupihwa inishuwarenzi yeFDIC kana "neimwe nzira kuchengetedza matura kuFederal Reserve kuona kuti ese macoincoins anogona kushandurwa nyore nyore kuita madhora eUnited States, pakuda."
Chitambi chebhiri iri kuva mutemo chinoda kuti voga vakazvimiririra vatengesi vemari vouya pasi pekutarisisa kwakananga kweFederal Reserve. Izvo zviri muchidimbu nekuti "zvinotsanangudza zvisina tsarukano mari dzesimbi semari iri pasi pemutemo wezvematongerwo enyika," Rohan Grey tweeted.
Stablecoins ndeye crypto-assets inotsigirwa nemari yefiat kana tswanda yemimwe mari. Zvinhu zvakadaro zvinogona kutsigirwa nemadhora eUnited States, iyo Euro, kana chero imwe mari inozivikanwa. Stablecoins chikamu chakakosha cheiyo indasitiri ye crypto sezvo ivo vasinganyanyo kuita kusagadzikana kwakabatana nemamwe ma crypto assets.
Zvigadzirwa zvemari zveCrypto zvaenderera mberi nekuita masaisai gore rino nemadhizaini epamusoro echinyakare ekutengesa uye mafemu anotangisa crypto-based services. Mukuvandudzwa kwechangobva kuitika, kambani hombe yedhata yemari S&P Dow Jones Indices iri munzira yekutangisa crypto indexes muna 2021. chiziviso yakaitwa nefemu, ivo vari munzira yekutangisa yakagadziriswa cryptocurrency indexing sevhisi mukubatana neiyo crypto data Provider Lukka muna 2021.
"Isu tanga tichiona nzvimbo yedhijitari uye tinonzwa kuti yave padanho rekufarira masisitimu mukukura, uko makambani senge edu anoda kupinda nekubatsira pakujeka kwemusika," akadaro Peter Roffman, mukuru wepasi rese wezvinhu zvitsva. uye zano paS & P Dow Jones Indices.
Iyo Crypto indices haisi nyowani nyowani. Kubva 2018, Bloomberg Galaxy Crypto Index yave ichizivikanwa nekupa makotesheni pane yakanyanya mvura crypto zvinhu. Iyo Nasdaq stock exchange yakanyorawo akati wandei e crypto indices munguva yakapfuura.
Kufamba uku kunoratidza kupinda kukuru kweS & P mu crypto indexing. Tichifunga nezvematanho akatorwa nefemu kare mukuhaya blockchain mainjiniya, vanogona kunge vari ivo vega kuti vawedzere zvimwe pane blockchain uye cryptocurrency nzvimbo. Iyi nzvimbo inogona kugadzirirwa kukwikwidza kwakanyanya uko pakupedzisira kukuru kune indasitiri.
Ethereum fund kutanga kuToronto Stock Exchngirozi
Kugamuchirwa kweEthereum-yakaburitswa zvigadzirwa zvinoramba zvichipisa kupisa. Mukuvandudza kuchangobva kuitika, weCanada digitaga yemari yekudyara maneja ichavhura IPO svondo rino kuburitsa Ether Fund, iyo Ethereum yekutsinhana-yakatengesa kuvimba paToronto Stock Exchange (TSX). Iyo ETH Fund ichave yakanyorwa pasi pechikwekwe QETH.U. Uku kukura kwakatanga kuve nemimba naVitalik Buterin muOntario.
Iyo yekutanga ichave neakakwira kupa kwe $ 100 mamirioni iyo ichave yakavhurwa kusvika Zvita 12, 2020. Iyo iri kuburitsa yakasimba 3iQ inozvirumbidza inodarika madhora mazana mana emamiriyoni eCAD mukutonga kwemidziyo, iyo kambani inotarisa pakuburitsa Bitcoin, Ethereum, uye Litecoin zvine hukama zvigadzirwa.
Hapana mubvunzo kuti nzira yekudyara iyi ndeimwe yenzira dzakasarudzika dzekudyara kwevatengesi nevashambadziri vangangoda kusiya kwavo nzira dzekuchengetedza uye cryptocurrency chengetedzo.
Mwedzi yapfuura yaona mutsara kumusoro kwezvitsva zvemari zvinopihwa mhiri nekunze kweindasitiri. Imwe nguva munaNovember, Goridhe hofori VanEck anonzi debuted a Bitcoin exchange-traded noti chigadzirwa kuGerman. Izvi zviri kuseta matauriro evamwe vatambi kuti vapinde muchiitiko ichi.
OMG iri munzira yekuchinja kwakawanda sezvo Hong Kong-based OTC yekutengesa kambani Genesisi Block inowana chirongwa chakakurumbira. OMG isiri-yekuchengetedza, yakaturikidzana-2 kuyera mhinduro yakavakirwa iyo Ethereum blockchain. Uku kutora kwaive kuziviswa musi waDecember 3. Genesis Block Ventures akacherekedza kuti ivo vaida kushanda neOMG kuvaka "kukweretesa nekutengesa mapuratifomu" enzvimbo yeDeFi.
Kuwanikwa uku kuchazobvumidza iyo femu kuti iwedzere kubatana kwayo muindasitiri ye blockchain yeAsia kuti ikurumidze kusimudzira mukati meOMG Network, ichisvika mukudyidzana kunobatsira kuchabatsira ecosystem. Sekureva kwaGenesis Block, ivo vakabatikana kwazvo munzvimbo yeDeFi gore rino, vachivaka hukama hwakakosha neFTX neBinance.
Kana iwe usingazive, Genesis Vimba debuted muna 2017 seHong Kong-based trading platform, inotanga mari yeAptocurrency ATM uye hardware yemigodhi. Paflip, OMG yaimbozivikanwa saOmisego asi yakazodzokororwazve muna Chikumi 2020. Iyo chirongwa chirongwa chakakurumbira che cryptocurrency chakatangwa muna2017.
Sechikamu chechipiri chepuratifomu, OMG inoburitsa inosvika zviuru zvina zveEthereum kuchinjiswa pasekondi, network inomhanya zvisingaite ichienzaniswa netieteti yeETH. Uku kutora kunogona kunge kuri kuisa toni yemamwe mafambiro makuru mukati meiyo OMG ecosystem.
Crypto neBlockchain Nhau Dzakakosha: Vhiki yaDecember 3rd 2020
Crypto neBlockchain Zvinoratidza: Bitcoin musika cap mabhiriji ATH, ETH 2.0 zuva rekuburitsa rakasimbiswa, XRP inokwira kune maviri-gore kukwirira, PayPal ichienda hombe paBitcoin, S. Korea inofamba kurambidza zvakavanzika mari; Iko kune zvimwe muvhiki ino Crypto Zvakasimbiswa.
Nhau dzepamusoro Pamhiri Kwese Indasitiri
Ethereum 2.0 yakasimbiswa muna Zvita 1 kuvhurwa maawa mashoma pasati papera nguva
Singapore iri kuongorora yakawanda CBDC, local exec inoti
Zvekuvanzika Mari Dzinorambidzwa MuSouth Korea Crypto Inochinjisa Rinotevera Gore
Kusapindirana MuDeFi Iri Kuwana Rapid Traction
Kuputirwa Kwemusika Wevhiki Ino
Bitcoin cap yemusika inorova nyowani-yenguva-yepamusoro uye inodarika JPMorgan pa $ 352B
Paypal Yakatengwa 70% yeZvose Zvichangoburwa Midhi Bitcoin Mwedzi Wapfuura seDemand Rockets
XRP Mutengo Unokwira kune 2-Gore Kumusoro seAirdrop Frenzy Inovaka
Crypto neBlockchain Zvakakosha: Bitcoin musika cap cap mabhiriji ATH, ETH 2.0 kuvhurwa zuva rakasimbiswa, XRP inokwira kune 2-gore kukwirira, PayPal ichienda hombe paBitcoin, S. Korea inofamba kurambidza zvakavanzika mari; Iko kune zvimwe muvhiki ino Crypto Zvakasimbiswa.
Wepamusoro Crypto Misoro Na Crypkuenda kuGator
Ichitevera iyo yekutsika tsika uye yakatsanangurwa Spark airdrop yevanobata XRP, XRP yakamisidzana kurova $ 0.79, ichiisa nyowani 2-gore rakakwira.
Kunyangwe kutanga kunonoka kwevashandisi 'dhipoziti kune ETH 2.0 kero yechibvumirano, nguva yekupedzisira yakasangana munguva chete, ichisimbisa mukana weiyo genesis block naDecember 1.
PayPal uye Square's CashApp vanofungidzirwa kuti vanotenga zvinodarika zana muzana yeiyo ichangoburwa Bitcoin.
Ethereum 2.0 yakasimbiswa muna Zvita 1 kuvhurwa maawa mashoma pasati pafaini
Kumirira kwapera! Mushure memakore mashanu ekushanda kwakasimba paETH 5, humbowo hwedanda (POS) network yakasimbiswa kutanga musi waZvita 2.0. Iyo Ethereum dhipoziti chibvumirano yakasangana nemabhadharo ayo maawa mapfumbamwe chete kusvika panguva yekupedzisira, iine 524,288 Ether yakaiswa nevashandi vanosvika 16,384 muchibvumirano, ichisimudza tariro yekuti Ethereum genesis block ichaitika muna Zvita 1.
Kunyangwe paine chakaderera chimbadzo icho chakatanga kuperekedza staking kutora chikamu, chinjana kune dhipoziti kondirakiti yakawedzera maawa mashoma kusvika panguva yakatarwa. Izvi zvinounza ecosystem kune iyo nyowani nyowani kutanga kweimwe nguva, kufambisa iyo ETH network kubva kune chiratidzo chebasa (PoW) kune chiratidzo chedanda (PoS).
Sezvatatozivikanwa, vatori vechikamu vegenesis havazokwanise kutora yavo ETH yakaiswa kusvikira iyo ETH 2.0 yatanga muChikamu 1.5; kukwidziridzwa kwairehwa kusanganisa mainet Ethereum neETH2's Beacon Chain nenzvimbo ine sharded.
Zvakare, vazhinji vanobata ETH vari kutarisira kune vatatu-mapato kuvhura ekuregedza-akagonesa staking masevhisi, vasingafunge nezve mukana wekubuda kwekubiridzira.
Singapore iri kuongorora wholesale CBDC, local exec inoti
Mushure meBitcoin neEthereum 2.0, chirongwa chakanyanya kutaurwa nezvacho chirongwa cheBDCDC chakataurwa neCentral Bank yenyika zhinji. Iine China yatove kuyedza iyo Yuan yedhijitari, Singapore yave kuongorora mikana yeCentral Bank Dhijitari Yemari (CBDC).
Mutongi wezvemari uye mukuru weFintech mukuru kubhanga guru reSingapore Sopnendu Mohanty anonzi akaudza Cointelegraph iyo Singapore iri kuongorora yakawanda Central Bank Dhijitari Mari kana CBDC. Mohanty akasimbisa kuti kune kushomeka kudikanwa kweCBDC yekutengesa, iyo yekubhadhara system zvivakwa muSingapore yakatovakwa kusimudzira nekukurumidza uye kwakachipa kubhadhara mabasa pakati pevamiriri.
Saka nekudaro, Singapore yakanyanya kutarisana nekugadzira iyo yakawanda CBDC panzvimbo peyekutengesa CBDC, inova inobatsira mukugadzirisa kugadziriswa nekuchengetwa pakati pemasangano emari.
"Handifunge kuti pane zvimwe zvatinofanira kuedza kuita mumaCBDC akawanda," akadaro Mohanty. "Zvino, isu tinofanirwa kutanga kufunga nezvekuenda mukugadzira."
Achitaura nezvehurongwa hwehutongi huripo muSingapore, Mohanty akadzokorora kuti nyika ine ratidziro yakajeka yemitemo yatovepo inoita kuti ive nzvimbo yakanakisa kune chero munhu anoda kuvhura bhizinesi repamutemo re cryptocurrency.
Zvekuvanzika Mari Dzinorambidzwa MuSouth Korea Crypto Inochinjana Inotevera Year
Meso evatongi akagadzwa pamari dzevoga sezvo dzisinganyatso kuteverwa uye nekudaro yanga iri sarudzo yakasarudzika yekutengesa zvisiri pamutemo. Kuvimba nepakutanga chiziviso kutanga kwaNovember, Iyo Financial Service Commission muSouth Korea yakaburitsa pachena kuti havangashiviriri chero zviito zvinosanganisira chero zvinhu zvemadhijitari zvinobatsira kuwacha mari.
Iyi yekuvandudza yakapihwa sechikamu chakakosha chemaitiro aripo anotonga chaiyo yekubhadhara chiito muSouth Korea. Uyu murawo wakagadzirirwa kupinha pasi zvinoitwa nemari yekuvanzika mudunhu. "Mari yakasviba" sekudaidzwa kwainge yakanzi yaive yakanyatsoratidzwa mumagwaro emitemo akaburitswa.
Boka rakaratidza kuti mashandisiro kubva kumidziyo yedhijitari anga asinganyatso kuteverwa uye nekudaro zvakaoma kwazvo kuteedzera zviitwa zvisiri pamutemo zvinoshandiswa uchishandisa zvinhu zvakadaro. Mhedzisiro yemutemo uyu inogona kuve nemhedzisiro pamashandisirwo emari dzakavanzika seMeroero, Dash, Zcash, nezvimwe.
Mutemo uyu unotarisirwa kuti uzadzikiswe muna Kurume 2021. Zvisinei, imwe nguva munaGunyana, ichitungamira shanduko yakatorwa OKEx yakasiya rutsigiro rwayo rweZcash neDash midziyo yekutengesa pachikuva chayo kuitira kuti vatevedze nhungamiro dzakatarwa kare dzakatarwa nechikwata.
Yakatemerwa Mari (DeFi) yakawana yakawanda yekukwezva uye kufarira mumazuva apfuura seyakaenzana kukosha kwakakiiwa (TVL) pamitemo mikuru nguva pfupi yadarika yakakwira-nguva yese yakakwira ye $ 14.4 bhiriyoni. Ipo Ethereum akabata kukosha kwakanyanya, mamwe ma blockchains ari kukwira kuenda pachiitiko pamwe nekudyidzana pakati peichi paradigm shift.
Kubatanidza chinhu chakakosha pane ecosystem, tichifunga kuti yakakura sei iyo Defi mamiriro ezvinhu anogona kuve, pane kukahadzika kwese kuti Ethereum haazokwanise kutora kukosha kwakakura kudaro. Kutanga, isu takange takaputira Bitcoin (WBTC), ikozvino mamwe ma blockchains ari kutotanga kuvhenekera chiratidzo chekutora kukosha kubva kuchikamu chiri kukura.
Blockchains senge Wave, NEM vatora iyi nzira kuti vagadzire kusabatana kwecosystem mukati meEthereum network nepo Equilibrium iri kuvaka pamusoro pePolkadot. Izvi pakupedzisira zvichagonesa vashandisi kukanda chiratidzo chavo chekuzvarwa neshanduro yakaputirwa yeaseti yezvinhu.
Bitcoin cap yemusika inorova nyowani nguva dzese-kukwirira and inodarika JPMorgan pa $ 352B
Kutevera yazvino Bitcoin rally, iyo dijitari aseti yakakunda JPMorgan maererano nemari yemusika sezvo ichirova nyowani-yenguva-yepamusoro. Mavhiki achangopfuura anga achiitika kune Bitcoin sezvo ichienderera mberi nekumhanya kwayo ichityora kurwisa kukuru zviri nyore sezvo ichiita musangano padyo nemutengo mutsva nguva yese yakakwira.
kunyange zvazvo Bitcoin haisati yarova mutengo mutsva nguva dzese-nguva, iyo yakasarudzika nhumbi yakatoputsa yayo yapfuura ese-nguva yepamusoro musika capitalization, ichipaza nemamirioni emadhora mazana matatu nemakumi mairi nemaviri emamaki ikozvino kutengesa pamusoro pe $ 352k pa bitcoin senge munaNovember 19.
Kuvimba data rakawanikwa kubva kuMacro Trends, Musika cap yemubhengi hombe reUS JPMorgan yakavharwa pamadhora mazana matatu nemakumi matatu nemana mapfumbamwe emadhora musi waMbudzi 349 apo Bitcoin kapu yemusika yakakwira kusvika pamabhiriyoni mazana matatu nemakumi maviri nemaviri emadhora.
Yeuka kuti Jamie Dimon CEO weJPMorgan anga ari mutsoropodzi weBitcoin, achidana iyo yedhijitari pfuma 'kubiridzira' kumashure muna 2017, izvo zvakakonzera kuti Bitcoin ipinde zvakanyanya, ichinyora kurasikirwa kukuru kwemaviri manhamba. Kunyangwe mafungiro ake kuruzhinji nezveBitcoin asina kuchinja zvakanyanya, kune mishumo yekuti JPMorgan ine murwi mukuru weBitcoin mushure mekunge vazivisa nezveJPMcoin.
Zvisinei nekushoropodzwa uku, JPMorgan anonzi akaudzwa varairidzi vake kuti "mukana wenguva refu wekumusoro kweBitcoin unonzwisisika," zvichiratidza kuti iyo dijiti pfuma inogona kunge yakagadzirira kumwe kukwira kumusoro.
Kupinda kwePayPal mu cryptocurrency iyo yakagamuchirwa nemusangano mukuru kwave kuri kunozivikanwa, kutaura zvishoma. Iyo yazvino nyaya ine iyo iyo PayPal iri zvichinzi vakatenga 70% yezvose zvichangobva kucherwa Bitcoin kubvira hofori yekubhadhara yakatanga basa re cryptocurrency. Mune maonero akapamhama, SquareApp CashApp uye PayPal zvakatenga zvinodarika zana muzana yezvose zvichangoburwa Bitcoin.
Kubva pazivisa muna Gumiguru kuti mamirioni mazana matatu evashandisi vePayPal vanozokwanisa kutenga macryptocurrencies, mutengo weBitcoin wakabatana, uchipaza nemadhora gumi nemaviri panguva iyoyo. Dhata inoratidza kuti yazvino Bitcoin rally irikufambiswa nevatengi vemasangano. Makambani angangosvika makumi maviri nerimwe anosanganisira Galaxy Dhijitari Holdings uye Microstrategy Inc, vakaunganidza mari yakasanganiswa yemabhiriyoni gumi nemana emamiriyoni emadhora eBTC munzvimbo yavo. Izvi zvinoverengera pamusoro pe21% yekutengesa kweBitcoin.
Chikamu chakakura chemahombekombe ekutenga makuru akaitika mumavhiki mashoma apfuura, zvichikurudzira mutengo weiyo dhijitari yepamusoro. Iko kushomeka kupihwa kweBitcoin, pamwe nehafu ichangoburwa iyo yakadzora huwandu hwekubuda kweBitcoin hwakakonzera zvakanyanya pamutengo wemitengo pakati pekuwedzera kwekuda kubva kune vese vemasisitimendi nevekutengesa vatengesi.
XRP Mutengo Unokwira kune 2-Gore Rakakwira seAirdrop Frenzy Builds
Sezvo XRP inoungana kune itsva 2 gore kukwira, iyo Spark airdrop inogona kuve chikamu cheicho chinokonzeresa kufamba kwekupenga uku. XRP ikozvino wokutengesera kutenderera $ 0.54 mushure mekusvika yakakwira ye $ 0.79 kubva pasi pe $ 0.3 yakaonekwa svondo rapfuura. Sezvineiwo, XRP yakatsigira kutora zvakare nzvimbo yayo seyechitatu-yakakura mari yemadhora nemusika capitalization mushure meBitcoin.
izvi ichangopfuura ma highs haasati aonekwa kubva May 10, 2018. Kutevera rally iyi, pa-cheni data inoratidza kuti huwandu hweakaundi dzeXRP hwakwirawo. XRP Ledger inoratidza 200% kuwedzera, kusvika kune rekodhi 5,562 mumazuva mashanu apfuura.
Vazhinji vaongorori vava kubatanidza rally iyi kune yakasarudzika airdrop ye 'Spark' chiratidzo, chiratidzo chemuno che smart contract chikuva Flare Network. Iwo mabhiriyoni makumi mana nemasere eSpark tokeni anozofambiswa nemhepo kune vanobata XRP musi wa45 Zvita uye inotsigirwa neRipple yekudyara ruoko RippleX (yaimbova Xpring).
Iyo Flare Network ndeye yakatemerwa protocol yakatobatanidzwa neEthereum's Virtual Machine inogonesa Ethereum zvirevo zvakagadziriswa (DApps) kuendeswa kuFlare kutsigira XRP ecosystem.
Inoenderana nekukwira kwemutengo, pakave nekuchinjana kukuru kuchipinda kusvika pamabhiriyoni e2.3 XRP ari kutumirwa kuchinjana. Iyi data inoratidza kuti vazhinji vanobata vatove kubhuka purofiti kubva kumusangano wapfuura.
Crypto Zvakakomberedza: Vhiki yaNovember 20th 2020
Crypto Zvinoratidza: PayPal BTC rekodhi yekutengesa vhoriyamu paBinance.US, Bitcoin ATM yakakwira ne85% gore rino, $ 7.6B yakabiwa mu crypto kubvira 2011, Value DeFi protocol yakabiwa, Asi imwe forogo yeBCH: Kune zvakawanda mune ino svondo crypto yakajeka.
Crypto Exchange Service Yakatangwa neBelarus 'Yakakura Bhangi
Kukosha DeFi Protocol Inotambura Mamirioni matanhatu emadhora Flash-chikwereti Kushandisa.
Iyo DeFi Musika yekubatana neiyo Chaiyo-yepasirese Asset yeMari Inowanikwa
Bitcoin Cash Hard Fork Inoenda Live, ko ivo BCH Varidzi vanogamuchira mari nyowani?
Hackers uye Scammers Vakaba Madhora 7.6 Bhiriyoni muCrypto Kubva 2011
Coronavirus yekuvhara inotyaira kugamuchirwa kweBitcoin ATMs kumusoro ne85%
DeFi izvo zvinopesana: Yese Mushandisi Nhamba kumusoro kusvika 55% mumavhiki matanhatu chete
PayPal Inosvika 85% yeBinance.US Vhoriyamu muMwedzi Wokutanga
Crypto Exchange Service Yakatangwa neBelarus 'Largest Bank
Rimwe zuva raive bhangi muSingapore, ikozvino Belarus iri munhau; iyo institution 'FOMO' yatotanga?
Iri rakakura bhangi muBelarus, BelarusBank ichangobva kuzivisa kuvhura cryptocurrency exchange services. Iwo masevhisi anogamuchirwa anovavarira kufambisa mukana wekushandisa kwecryptocurrencies. Iyo inobvumira munhu nyore Tenga BTC (Bitcoin) mukutsinhana ne Fiat mari senge US dhora (USD), Russian Ruble (RUB) uye Belarusian Ruble (BYN).
Belarusbank transaction inoenderana neyakanyanya mutengo musika panguva yekutengesa. Tsanangudzo yebasa sezvakataurwa pawebsite yeWhitebird inotaura kuti sevhisi ichaitwa online. Kutenga nemaitiro ekutengesa zvichaitwa uchishandisa makadhi ekubhadhara Visa.
"Kutengesa Bitcoin uchishandisa maEuro kuchakurumidza kuwedzerwa kuhurongwa" anodaro BelarusBank.
Imwe nhepfenyuro yemuno inoburitsa pachena kuti masevhisi pakutanga airatidza vagari veRussia neBelarus. Zvisinei, zvirongwa zviri kuenderera mberi kuwedzera hwaro hwevatengi mune ramangwana. BelarusBank inoramba ichironga kuita Whitebird kutsigira bhangi mukupa mamwe masevhisi ane chekuita nemakristani kune vatengi vayo.
DeFi hacks anga achikwira muna 2020, kubva bZx protocol hack kuenda kuAkropolis. Zvino Koshesa DeFi iri mumisoro yezvikonzero zvezvikonzero zvisiri izvo.
Koshesa DeFi akarasikirwa nemadhora emamiriyoni matanhatu emadhora kuti atsvage anoshandisa chikwereti. NeChishanu, tambo pa Twitter yakaratidza kuoma kunyengera yezvikwereti zvemwenje nemurwisi akaita mari inofungidzirwa kuva mamiriyoni matanhatu emadhora.
Emilio Frangella akadana chikumbiro chakakura che80,000ETH kubva kuAave inosvika madhora makumi matatu nemasere emadhora musi waNovember 36th, 14. "Uku ndiko kushandiswa kwakaomarara kwandisati ndamboona", anodaro anozvitsanangura ega muchena mutsotsi uye mubatsiri we DeFi Italy.
Koshesa DeFi chiratidzo chakadzika 25% kubva pa2.73 kusvika pa2.01 panguva yekudzvinyirira nekuda kwekushandisa. Muchiitiko ichi Multi Stable vault pricing loopholes dzakashandiswa kusvika pamutengo we $ 6million. Nharaunda yekusawirirana yakabvuma kushandisa uye yakanga yakumbira nguva yekushanda pazvigadziriso zveMultStable vault.
Varwisi vakashandisa $ 0.31ETH kubva purofiti yakaitwa, kutumira meseji kune anoteedzera weprotocol adhiresi, achiti: "Unonyatsoziva zvikwereti zvemaflash?" Sekurwiswa kweDeFi kuri kuwedzera, Stani Kulechov weAave akataura pa Twitter kuti "kuvaka yakashinga DeFi kuri kuoma".
Iyo DeFi Musika yekubatana neiyo Chaiyo-yepasirese Pfuma yeEconomics Gains
Mukati megore rapfuura, nyika yezvemari yakasangana nemubhadharo mumari yakatemerwa mari kana DeFi ine mari inodarika $ 13 bhiriyoni mukati TVL(Yese kukosha kwakakiiwa). Seye tekinoroji fomati, DeFi yakaratidza kune nyika kugona kwayo kunoshamisa kwekuvandudza mukana wekukwereta bhizinesi.
DeFi protocol inopa kuhwina-kukunda mhinduro kune ese ari maviri crypto varidzi kuburikidza nenzira dzekukurudzira, kurima goho uye kune vakweretesi kuburikidza nekuwana zvikwereti zvine hushamwari mazwi.
Kutanga, kusagadzikana kwakanyanya uye kudarika-chibatiso kwakapa zvinetswa zvakakura pakukweretesa kweDeFi. Chibvumirano kusagadzikana zvakakonzera kurasikirwa ye $ 6.5million DAI yeMAKER chete uye panogona kuve nezviitiko zvakafanana mune ramangwana. Kechipiri, kusakwanisa kwemabhizimusi echinyakare kukwereta kubva kuDeFi pamwe nemari chaiyo kuyerera kuseri kwemaprotocol tokens kunokonzeresa kudzoka kukuru.
Kuenderera mberi, vafungidziri vanodavira kuti misika yeDeFi iri mukuda kukuru kwekuvakazve zvivakwa uye masisitimu anogona kubvarura mukaha nemabhizinesi echinyakare. Iko kunofanirwa kuve nekubatana zvisina musono pakati peDeFi neCeFi yezvigadzirwa zvakagadzwa kuti zviedze zvirinani mumusika wezvemari.
Sezvo Bitcoin Cash yakabuda kunze kweBitcoin, iyo crypto asset yakabatwa muwebhu yeakawanda maforogo anomuka nekuda kweimwe gakava kana imwe. Mushure mekuparadzaniswa kweBSV, BCH yakavhurira imwe forogo.
Ivo vanopokana zvikuru vakaomarara vanhu ve (BCH) Bitcoin mari blockchain ikozvino yapedzisira yaurayiwa. Chirevo pane izvi chinoti, "parizvino pane akahwina zvakajeka mukukakavadzana pakati pezvikwata zvekuvandudza zve Bitcoin Cash (BTC ABC) uye Bitcoin Cash Node (BCHN).
Peep mune hash mwero yemapato ese ari maviri BCH, ABC uye BCHN inoratidza kuti BCHN ndiyo inokunda ine ese 73 emabhureki akacherwa kuburikidza nekushandisa BCHN software yekuchera dziva.
Kukunda kweBitcoin Cash Node kwaitarisirwa kunyangwe pamberi peiyo Bitcoin Cash yakaoma forogo, 88% yevashandi vemigodhi vatove Wapikisa rutsigiro kuna Roger Ver, Chief mugadziri weBCHN. Kunyanya zvakadaro, kuchinjana kukuru senge Coinbase kwakazivisawo kutsigira kwavo BCHN.
Gakava Shure kweForogo Rakaomarara
Kukakavadzana kwakaunza forogo yakanangana ne "Coinbase Rule", iyo inotaura kuti 8% yeMined BCH inotungamirwa kuBitcoin ABC kuti ibhadhare kuvandudzwa kweprotocol. Roger Ver anoona iwo mutemo weCoinbase unoonekwa sesoviet -style yepakati yekuronga kurota ichiitika uye nekudaro aive achipesana nazvo.
Mari inodarika mabhiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe emadhora ekuAmerica inonzi yakabiwa kubvira 7.6 nemazita maviri emabhaketi anofungidzirwa. Hacks uye Scams. Sekureva kweshumo, $ 2011 bhiriyoni yabiwa kuburikidza neHacks inokwana kungangoita zana nemakumi matatu nematatu ekurwiswa, hukuru hwacho huri kubiridzira kweCoincheck muna2.8 nemari inosvika $ 113 miriyoni yeNEM Coin
IUnited States, United Kingdom, China, Japan, neSouth Korea vakasangana nenhamba yepamusoro yekutyora kwekuchengetedzeka, uko United States iri kutungamira pamwe nekurwiswa kwakanangana ne13. Crystal blockchain yakazivisa makumi maviri nematatu ehurongwa hwekunyepedzera ne $ 23 bhiriyoni yakabiwa kuburikidza nechitsotsi.
$ 7.6 bhiriyoni ndeyekufungidzira kwakashata kwemari ye crypto yakabiwa mumakore gumi apfuura, uko China iri kutungamira iyo pack maererano nehama dzayo huru. Zvinosuruvarisa, iyo nhamba yeyakaomesesa hacks uye chitsotsi zvinomira chete kuwedzera sekufamba kwemakore.
Coronavirus kukiya inotyaira kubvumidzwa kweBitcoin ATMs up ne 85%
Pasi rose, Bitcoin automated teller muchina kuiswa kwayakaitwa gore rino nekuda kweiyo coronavirus-inosimudzira kudiwa kwekusabatana. Huwandu hweATM dzeBTC hwakawedzera ne85% zvichiunza huwandu hwacho kusvika pa11798, sekutaurwa kwazvakaitwa Mari yeATM Radar.
Mune mumwe mushumo na Global Trade Magazini, inoratidzira kuwedzera kuri kuitwa kweBitcoin sekutya kwehutachiona hwekoronavirus kunowedzera kukura kwemusika. Bitcoin ATM inobvumidza mashandisirwo uchishandisa makadhi echikwereti kana echikwereti, kuburikidza nezvose zviri zviviri nharembozha kana zvemacomputer.
Makore anodarika mazana masere eBTC maATM akaiswa muna Gumiguru muUS chete uye nyika zhinji dzinogona kutevedzera. Izvi zvinotyaira kuwedzera kutora chikamu uye kushandisa mumakristpto edhijitari pasirese seBitcoin inofamba yakasimba kupfuura nakare kose kuenda kunogamuchirwa. Nemakambani mahombe akaita sePayPal ikozvino achikweretesa rutsigiro rwavo, mari yedhijitari yakanyatsogadzwa kuti ipinde mune inotevera wave yekutora vakawanda.
DeFi izvo zvinopesana: Yese Mushandisi Nhamba kumusoro makumi mashanu neshanu muzana muna just masvondo matanhatu
Iwe haugone kuchengeta nyika ye Yakatemerwa Mari kunze kwekuonekwa. DeFi yakwanisa kurekodha kubvarura 55% kukura mune yakazara kwete. revashandisi mukati memavhiki matanhatu apfuura kunyangwe nekurasikirwa kukuru kwakaitika mumwedzi wapfuura. Zvikuru nekuda kweiyo negativity yakakomberedza DeFi, vatsoropodzi vazhinji vakakurumidza kunyora iyo "DeFi bubble". Kuyera metric zvakadaro zvinoratidza kuti iyo indasitiri yakasimudzira chikamu-chakakura kukura.
Crypto misika data aggregator Dune analytics yakacherekedza kuti huwandu hwevashandisi veDeFi vakasarudzika hwakawedzera zvakapetwa kagumi pamusoro zvichienzaniswa nenhamba kubva gore rapfuura. Kupa maonero, vashandisi vatsva 85,000 vakawanikwa vachiwedzerwa kunhamba iripo yevashandisi veDeFi mukati memavhiki maviri ekutanga aNovember 2020.
Compound uye Dydx vari pakati pevanove nesimba zvakanyanya veDeFi munguva dzichangopfuura. Uniswap yakawedzerawo nekukurumidza sehuwandu hwekubatana akasimuka ne 34%. Uniswap, Curve, Sushiswap uye Ox yekugadzira zvinopfuura 91% yehuwandu hweDecentralized Shanduko.
PayPal Inosvika 85% yeBinance.US Vhoriyamu muKutanga Mwedzi
Vashandisi veAmerica vari kuvhara mune zvinyorwa $ 25 miriyoni yekutengesa vhoriyamu muBinance.US kuchinjana, mukati memwedzi mumwe chete wePayPal's crypto service kuvhurwa. Musi wa13 Mbudzi, PayPal yakasimudza iyo nguva yekumirira yeayo US-based vatengi.
PayPal yakatanga crypto zvipo mukubatana naPaxos muna Gumiguru. Mazuva ese kutengeserana vhoriyamu pa Paxos basa rekutengesa, ItBit kuchinjana yakamuka kanokwana kana mukati maNovember. Kutevera PayPal's crypto kuvhurwa, $ 30 mamirioni emadhora mukutengesa kwezuva kwakanyorwa kuunza PayPal kumapeji epamberi makuru makuru enhau uye mapuratifomu enhau.
Nekudaro, PayPal ichiri kuda kuvhara ivhu rakakosha, isati yanyatso kutora makwikwi nekutsinhana senge Kraken uye Coinbase Pro uko huwandu hwezuva nezuva hwekutengesa hunodarika madhora mazana mashanu emadhora. PayPal ingangodaro ichivhura chinotevera chikamu chekristptocurrency mainstream kubvumidzwa kuburikidza nedziva rayo revashandisi vemamiriyoni makumi matatu nemazana matatu nemazana mana sevashandisi vanoshanda muUS.
Panguva ino, PayPal inotsigira mana chete madhijitari: Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, uye Ethereum. Pane zvirongwa zvekuwedzera muEurope pane kuenda pasi rose nekuita kuti sevhisi yayo iwanikwe kune vese vashandisi vePayPal.
Izvo zvinofanirwa kutaurwa ndezvekuti PayPal haibvumidze vashandisi kubvisa yavo cryptocurrency kubva papuratifomu yavo, vachikunda zvinangwa zvese zvekutenga macryptocurrencies kuburikidza nePayPal. Zvakare, PayPal ine rekodhi rekodhi yeakaoma maaccount pasina yambiro, ichisiya vamwe vatengi vasina nzira yekupokana nesarudzo yePayPal uye vangangosiya vamwe vatengi vaine kurasikirwa kukuru.
Sezvambotaurwa kare mune yedu posvo yakanzi "4 Yakanakisa Maitiro Ekutevera Mukuchengetedza Yako Cryptocurrency Holdings", Kana iwe usiri wako makiyi eiako cryptocurrency chikwama (s), unogona zvakare kufunga iyo cryptocurrency seyako isiri yako. Naizvozvo zvine hungwaru kutenga cryptocurrencies kuburikidza nekutsinhana senge Binance iyo inoita kuti ubvise yako crypto kune yako wega chikwama kero.
4 Yakanakisa Maitiro Ekutevera Mukuchengetedza Yako Cryptocurrency Holdings
Chimwe chezvidzidzo zvakakosha kwazvo zvinokurudzirwa newbie munzvimbo yeiyo mari yemadhora nzira yekubata nekuchengetedza zvakanaka mari ye cryptocurrency. Ichi chingangove chidzidzo chakakosha kwazvo mu crypto dzidzo kunyanya painotanga. Mune ino nzvimbo, iwe uri rako bhengi uye nekudaro iwe ndiwe wega unokonzeresa chero zvingangoitika kurasikirwa kwazvinowanikwa.
Kubva pakutenga cryptocurrency uchishandisa a crypto exchange kutsvaga chengetedza chikwama chekuchengetedza & kuchengetedzeka kutengeserana kwema cryptocurrencies zuva nezuva, zvakawanda zvinogona kukanganisika nekuda kwekusaziva kana kwekusava neruzivo rwakakwana pama cryptocurrencies. Saka ngatitaurei zvishoma nezve blockchain tekinoroji uye kuti ma cryptocurrencies anosunga sei mairi.
Cryptocurrency uye Blockchain: Ngatizivei izvo zvekutanga!
1. Kusarudza Bitcoin Wallet
2. Crypto Wallet Kuchengetedzwa
3. Kuchengetedza Zvakachengeteka Wako Wallet
4. Kwete Kiyi Dzako, Kwete Mari Dzako!
Bitcoin yaive yekutanga cryptocurrency yakavambwa na munhu asingazivikanwe kana boka revanhu vari pasi pezita rekunyepedzera Satoshi Nakamoto mukumuka kwedambudziko remari ra2008. Kubvira pakutanga kwavo, Bitcoin uye mamwe ma cryptocurrensets akaenderera mberi achifora akananga kune vakawanda kugamuchirwa.
Iyo cryptocurrency iri yemari chaiyo kana yedhijitari yakachengetedzwa ne cryptographic ledger izvo zvinoita kuti zvive zvisingaite kuburitsa zvekunyepera uye kuita kuti isabatike nekaviri-kushandisa. Mazhinji macryptocurrencies akaiswa pasi uye akavakirwa pamusoro pe Blockchain teknolojia.
Chinhu chakajairika pakati pemazhinji madhijitari ndechekuti iwo haana kupihwa kana kudzorwa nechero bato repakati. Nekudaro, ivo vanopokana nekudzvinyirira uye kupindira kwehurumende kana kumanikidza. Nekugadzira, ivo vanodzidziswa.
Cryptocurrencies inogona kuchinjika yakanangana pakati pemapato zvisina musono pasina kudiwa kwechitatu bato; hapana mabhanga, hapana escrow system. Kazhinji, mubhadharo wemigodhi unobhadharirwa kutumira mari yemadhora, iyo inobhadharwa nemutumi. Mazhinji blockchains anotsigira yakaderera fizi yepasi peasendi kana masendi mashoma ayo anokwikwidza zvakanaka nemari yakawandisa inobhadharwa nemabhangi.
Bitcoin inomhanya pane isina kuvimbika uye yakajeka ledhi tekinoroji (blockchain) iyo inoshambadzira kopi yezvese zvainoita kune ese mapato anobatanidzwa. Zvese zvekutengesa zvinoonekwa uye zvinogoneswa nemunhu wese ari mu network.
Mukusimbisa kutengeserana blockchain tekinoroji inotora algorithm yekubvumirana. Kuti chero shanduko dziitwe padandemutande, chibvumirano chinofanirwa kusvikwa nevezera rese ve network (for. Eg vese vacheri mune yeBitcoin). Kana shanduko yakarongwa ikatadza kuwana chibvumirano chinodiwa, shanduko yakadai inodonhedzwa netiweki otomatiki.
Kutenga cryptocurrency kwenguva yekutanga zvaizorevawo kutsvaga a anovimbwa cryptocurrency chikwama kuchengetedza zvakachengeteka zvinhu zvako. Kuziva maficha akakodzera kuti utarise paunenge uchisarudza yako crypto wallet ndiyo inonyanya kukosha kune anofarira crypto. Vazhinji vakasangana nenjodzi uye dzimwe nguva vakarasikirwa nekutenda mumari yemadhora zvachose semhedzisiro yekusaziva nekusarudza sarudzo dzakachengetedzeka dzemari ye crypto.
Vashandisi veCryptocurrency vane sarudzo yekusarudza pakati pepamhepo, isingaite kana Hardware zvikwama. Zvichienderana nesarudzo yaunogadzirisa chikwama chine zvinhu zvakachengetedzeka zvakakwana. Kunyangwe zvikwangwani zvepamhepo uye zvepamhepo zvakaratidza kuve zvakachengeteka, zvisinei, Hardware zvikwama dzinozivikanwa kupa chengetedzo yepamusoro yezvinhu zvako zvemadhijitari.
Zvikwereti zvepamhepo zvinowanzo kuve zvemahara, zvinoshandisa mushandisi uye zvinowanika zviri nyore uye nekudaro, ndidzo dzinonyanya kushandiswa zvikwama mu crypto indasitiri. Panguva imwecheteyo, ivo ndivo vanonyanya kutambura pakati pemhando dzakasiyana dze crypto wallets. Pedyo ne Hardware chikwama, chikwama chisina kubatana chinopa chengetedzo irinani zvirinani kune yako crypto zvinhu. Nechikwama chisina kubatika, unomira mungozi yekurasikirwa nemari yako chete kana ukarasikirwa nepepa.
2. Crypto Wallet Chengetedzo
Paunenge uchifunga nezvewebhu chikwama, ita shuwa yekusarudza kubva pane runyorwa rwezvikwama zvakachengetedzwa neHTTP (HTTPS). Unogona kudzikisira sarudzo dzako zvichienderana nekuti chikwama chacho 2FA / MFA chakagoneswa uye chine rutsigiro rwe password rakasimba. Dandemutande chikwama chisingatsigire maficha aya chinogona kuisa dzimwe njodzi kumari yevashandisi. Blockchain.com muenzaniso wakanaka weakadai chikwama chepamhepo, chiri nyore kushandisa uye chakakodzera kuchengetedzeka. Mahwendefa epamhepo anowanzo kutaurwa se gore wallets.
Kana kuchengetedzeka kune kwakanyanya kutarisisa pamusoro pehukama hwevashandisi, mutengo webasa nezvimwe, homwe yehardware inogara ichikurudzirwa. Ledger Nano X inozivikanwa zvakanyanya pakati pehardware wallets kunze uko uye kuchikwereti chayo zvakambo rekodha zvakada kuita zero zero munguva yakapfuura.
Mazhinji maBitcoin wallets ndeMultisig; zvichireva kuti vanoda zvinopfuura kiyi imwe yekupa mvumo yekutenga (zvinotora mapato mazhinji kuti asaine chibvumirano asati aurayiwa). Iyi ndiyo imwe nzira huru yekuchengetedza Bitcoin kubva kungangoba. Mamwe anozivikanwa akawanda emari-wallets ndeyeTrust Wallets, Coinomi, Blockchain.com nharembozha, nezvimwe.
Kana iwe uri kushandisa cryptocurrency chikwama kekutanga nguva, kunamatira kune yakachengeteka asi mushandisi-inoshamwaridza chikwama chinofanirwa kuve chinangwa chako. Kazhinji nguva, kurasikirwa kunoitika nekuda kwekusakwana ruzivo rwekuti ungashandise sei mari ye cryptocurrency. Aya marudzi ekurasikirwa anowedzerwa kana chikwama chiri chakaomarara; zvichiita kuti zviome kufamba nenzira.
Ehe, pane zviitiko apo crypto midziyo inorasika ichinge yatumira kune asiri iye anogamuchira. Semuenzaniso, Bitcoin inotumirwa kukero yeETH; kunyanya kana iwe uri kushandisa yakawanda-mari mawallet. Mhosva dzakadai idzi dzakajairika asi zvakare dzakakamurwa seye rookie kukanganisa. Naizvozvo, zvikwama zvisingaratidzi kero zvisiri izvo zvinofanirwa kudzivirirwa zvachose.
Iwe unenge uine zvishoma kana kusatonga pamusoro pechikwama chako kana chisina kunyatso tsigirwa. Chikwama chaicho chine kiyi yakavanzika uye yeruzhinji. Sezvinoreva zita iri, kiyi dzeveruzhinji hadzisi dzakavanzika; vanogona kuonwa nechero ani pasina zvingangoitika mhedzisiro. Veruzhinji makiyi anotakura ruzivo nezve yako yese nhoroondo yekutengesa. Chero ani anobata kiyi dzako dzeveruzhinji anogona kuona ese nhoroondo yekutengeserana asi haakwanise kuita shanduko pamari yako.
Yakavanzika kiyi kune rumwe rutivi makiyi akavanzika uye akakosha kwazvo dzinofanira kuchengetwa sechakavanzika kubva kune chero wechitatu bato. Yakavanzika makiyi ndiwo tenzi kiyi kumari yako, chero munhu ane ako ega makiyi anogona kushandisa yako mari pasina mvumo. Iyo tambo yemavara ndizvo zvese zvaunoda kuti uwane mari yako muchiitiko chekutadza kuwana mukana kune yako nharembozha kana PC yakachengeta chikwama chako.
Naizvozvo, inofanirwa kuteedzerwa nenzira kwayo uye kuchengetwa kune imwe nzvimbo zvakavanzika kuitira kudzivirira kukuru. Muitiro wakanaka kusevha makiyi aya munzvimbo dzakawanda dzisiri pamhepo. Usambofa wakachengeta makiyi ako epachivande pamhepo kunyanya muemail kana dhatabhesi repakati iro rinogona kushandiswa.
Paunenge uchisarudza chikwama che cryptocurrency, ita shuwa kuti chikwama chinokupa sarudzo yekutengesa makiyi ako epachivande mune faira rakanyorwa. Dzivisa kutora zvidzitiro zvemakiyi ako epachivande kana passphrase, sezvo mamwe maapplication angagona kuwana yako skrini uye mafaera.
Izvo zvinoonekwawo seyakanakisa tsika kuyedza kudzoreredza mari yako uchishandisa iwo akasarudzika makiyi kana mapasipoti ekuona kuti yako backup inoshanda. Kunyangwe, zvinoshanda pasina kutadza kana zvichiteedzerwa nemazvo.
Mikana ndeyekuti iwe pamwe wakambonzwa nezve chirevo ichi kashoma! Chirevo ichi chakave chekristpto-imba pakati pekukurumbira kuri kuwedzera pakati pekuchinjana kwepakati uko kunochengeta makiyi ako asi kusingakupe mukana wekuwana iwo.
Kana iwe usiri wako makiyi, iwe une ganhuriro kutonga pamusoro pemari yako - zviri nyore senge izvo! Kunyangwe centralized exchanges zviri nyore kushandisa uye Zvakanakisisa pakutengesa, ivo vanogara vari zvinangwa zvekutanga zve crypto hacks, sevashandisi vakadaro vanogona kurasikirwa nemari yavo nyore nyore mune yekurwisa kukuru.
A centralized cryptocurrency exchange inogona kuramba iwe kuwana kune yako mari chero nguva, ita pane zvirevo zvehurumende kutora zvinhu zvako kana kungozoita bhizimusi rekunyepedzera uye kuba mari yako.
Kuchengeta izvi mupfungwa, cryptocurrency exchanges haisi nzvimbo yakanaka yekuchengetera yako crypto zvinhu kunze kwechinguva kwekutengesa. Kana zvikave zvakakosha kutamisa yako crypto mari kuchinjanisa, saka zviri nani kunamatira ku vane mbiri.
Chikwama chakatemerwa pasi icho chinokupa mukana wekuwana makiyi ako epachivande chinofanirwa kuve sarudzo yakasarudzika yekuchengetedza mari ye cryptocurrency. Kuchengetedzwa kweCrypto ndiyo imwe yenyaya dzinonyanya kutaurwa muindasitiri iyi, asi vanhu vazhinji havasi kuiteerera zvakakwana.
Most crypto kuba, hacks, uye chitsotsi zvinoitika nekuda kwekukanganisa, kuregeredza kwevashandisi izvo zvinowedzera kusimbisa kukosha kwe crypto dzidzo, kunyanya sekuchengetedzwa kwekrispto ndicho chidzidzo chayo chakakosha kwazvo.
Crypto & Blockchain Nhau - Vhiki yaNovember 11th 2020
Crypto Zvinoratidza: Rebhanoni kuvhura zvigadzirwa zvemadhijitari, maDeFi hacks ari kuwedzera, New Jersey inosvitsa Crypto License, maCred mafaira ekubhuroka, KuCoin yakawana 84% yeiyo yakabiwa crypto: zvimwe zvinonakidza pazasi!
Crypto yevhiki ino inoratidza ne Crypto Gator tarisa pane inotevera yepamusoro nyaya uye nevamwe vazhinji vanobva kutenderera pasirese.
Pamusoro Crypto Misoro
Wepamusoro Crypto Nhau
Rebhanoni kuvhura mari yedhijitari mukutarisana nehupfumi pamwe nemari
Report: Mhosva dzeCrypto dzakaramba mu2020, asi maDeFi hacks ari kuwedzera
West Africa Chirongwa Chichachengeta Mamiriro ekunze Dhata paTelos Blockchain
New Jersey Inoswedera Pedyo neCrypto License Nesumo yeSeneti Bill
Dhijitari mari inokweretesa Cred mafaera ekubhuroka
KuCoin yakawana 84% yeiyo yakabiwa crypto mushure mekubira kwe $ 280M, anodaro mubatsiri
Ose maBhangi Makuru Achave Nechekuita neBitcoin, Anodaro Akakurumbira Fund Mutariri Bill Miller
Kutevera kubiridzira kukuru kwaKucoin, CEO Johnny Lyu akazivisa muna Mbudzi 11 kuti kambani kusvika parizvino yakawana kusvika pamakumi masere nemasere ezviuru zvemidziyo yakabiwa mukunyepedzera kwazvino.
Major crypto mukweretesi Cred anonzi akamhan'arira kubhuroka zvichitevera mishumo yekuti bhalanzi rake "rakakanganiswa" ne "anokonzeresa zvekunyepedzera"
Iyo yazvino DeFi boom yakwezva yakawanda yakaipa mazai zvichikonzera kukwidziridzwa kweDeFi hacks kunyangwe iko kuderera kukuru mu crypto scams muna 2020.
Chinyorwa chinyorwa: Forbes
Sezvo mari yedhijitari iri kuramba ichiwana kugamuchirwa kukuru, nyika zhinji dzave kutarisa kuvhura vhezheni yedhijitari yemari yavo yekuzvarwa kudzikamisa chokwadi chehupfumi. Muchiedza ichi, Rebhanoni ikozvino iri kutora nzira yakafanana. Sezvakaziviswa nebhanga guru renyika, Lebanon iri kugadzirira kuvhurwa kwemari yayo yedhijitari muna 2021.
"Tinofanira kugadzirira chirongwa cheLebanese chemari yedhijitari," akadaro gavhuna weCentral bank Riad Salameh. Salameh zvakataurwa kuti vakafungidzira kuti kune mabhiriyoni gumi emadhora akachengetwa mukati memisha zvinoenderana nehurumende yeNational News Agency. Mari yedhijitari yakamisikidzwa kudzoresa chivimbo zvakare mubhengi system.
Bhanga repakati rakacherekedza kuti chirongwa chemari yedhijitari chakarongerwa kuvhurwa muna 2021 chichaita mukuzadzikiswa kwemari isina mari yekusimudzira mari yemuno neyekunze.
maererano kuWorld Bank, mari yemunyika inobhadharwa iri pamwero ingangoita 14% yeGDP yayo. Izvi zvinokwikwidza kusimudzira kusagadzikana kwekutumira system kubva kune yakakura diaspora yepasirese.
Pasina kupokana, 2020 yanga iri inoshamisa yeDecentralized mari (DeFi), iine kuwedzera kwechido chakakura. Kubvumidzwa uko kwaiperekedza chikamu cheindasitiri kwakaenzana zvakaenzana nekukwira kweprotocol hacks yakasiya zvakanyanya Defi zvirongwa zvekubuda ropa kusvika pakufa.
Kunyange, data kubva crypto analytics firm CipherTrace inoratidza kuti huwandu hwakazara hwekurasikirwa kwe crypto nekuda kwekubiwa kwekrispto, kubiridzira, uye hacks akadzika kubva $ 4.4 bhiriyoni muna 2019 kusvika $ 1.8 bhiriyoni pamwedzi yekutanga gumi yegore ra10, zvichiratidza kudonha kukuru mumhosva dze crypto. CipherTrace CEO Dave Jevans akaenderera mberi achisimbisa kuti kudonhedzwa kukuru kwemhosva dze crypto chiratidzo chebudiriro yazvino mumatanho ezvekuchengetedza akaiswa mukati meindasitiri iyi.
Kunyangwe kudzikira kwemhosva dze crypto muna 2020, CypherTrace yakaenderera ichirondedzera kuti kwave nechombo chikuru chiri kutarisirwa kumabasa eDeFi izvo zvakakonzera kukwira kweDeFi hacks izvo zvino zvinoita makumi maviri muzana ezvese kurasikirwa kwe crypto nekuda kwekuba. "Kuwedzera kweDeFi ndiko kwakazokwezva vapambi vematsotsi, zvichikonzera kushomeka kwakanyanya kune ino chikamu gore rino," chirevo ichi chinowedzera kujekesa.
Iko kufora kuenda kune hukuru kugamuchirwa kunopfuurira sezvo mamwe maNyika anotarisa kuti apinde mu blockchain kugona. Ino nguva, yakakurumbira blockchain chikuva Telos yasvika mukudyidzana nekambani yakavhurika-sosi yekombuta kambani Telokanda Weather Group. Kubatana uku kwakanangana nekutanga chirongwa chinobatana uye chinogovera mishumo yemamiriro ekunze mudunhu reWest Africa paTelos yeruzhinji blockchain.
Sekureva kweruzivo, kambani yekuWest Africa inoshandisa iyo Telos blockchain kubatsira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro uye nharaunda yekurima kuti vanyore nekugovana mishumo yemamiriro ekunze nedonzvo rekuvandudza kutsvagirwa kwemamiriro ekunze, kufungidzira kwemamiriro ekunze, uye kuteedzerwa kwedutu.
Senge panguva yekunyora ruzivo urwu, Telokanda akatosvika pakubatana ne University of Uyo uye Rivers State University muNigeria, uye zvakare City Academy kuburikidza narwo vadzidzi vanozokwanisa kuvhura mamiriro ekunze ekuteedzera mabhaluni ekutsvaga data.
Kutanga, Telokanda inoronga kuti yunivhesiti yega yega ivhure bhaluni rimwe pasvondo, ichikwirisa kutanga kwezuva nezuva na2021, akadaro mutauri.
Mutemo weCrypto wanga uri musoro unopisa mumaindasitiri gore rino uye sezvanga zvichitarisirwa, mafemu mazhinji e crypto anowanzo tenderera akananga kumatunhu anokurudzira kurongeka kwekrisptm mirau. Kunyangwe hazvo chikonzero chemitemo chingave chakasiyana nemasimba uye nekudaro nyika zhinji dzirikuto detaira mitemo yekugadzirisa zviitiko zve crypto. New Jersey ndiyo yazvino pane ino chinyorwa.
Iyo New Jersey crypto bhiri "Dhijitari Asset uye Blockchain Technology Mutemo" yakatsigirwa naSen.Nellie Pou neChina, wa3 Gumiguru. Seneti bhiri 3132 yakamisikidzwa kudzora vanopa mari ye cryptocurrency pasi pekutarisirwa kweNJ department reBanking neInishuwarenzi.
Iyi bhiri nyowani inoreva kuti mabhizinesi nevanhu vanozotadziswa kuita chero bhizinesi rekristpto zviitiko kunze kwekunge vawana rezenisi muNew Jersey kana vane rezinesi rekudzosera kune imwe nyika.
Nekuda kweizvozvo, chero asina kupihwa marezenisi anoshanda bhizinesi rekristpto muNew Jersey achabhadhariswa madhora mazana mashanu pazuva kusvikira fomu rezenisi rakabvumidzwa raiswa.
Dhijitari mari inokweretesa Cred mafaera ekubhurokay
Crypto hacks uye kubiridzira zvave zviri zvina muindasitiri uye zvakapa zvakanyanya kusavapo kwemamwe mafemu e crypto akatangira pane yakanakisa katsamba. Mukuvandudza kuchangobva kuitika, Cred mupi wemari yedhijitari uyo akapa chikwereti pamadigital emari akachengetedzwa anonzi akamhan'arira kubhuroka sezvo kambani ichizivisa bhajeti rakaipa.
Musi waGumiguru 28, Cred yakaburitsa kuti bharanzi yaro yaive "yakakanganiswa" ne "mutadzi wechiito chekunyepedzera." Kutevera budiriro iyi, Cred anga achinzi akamisa mari dzevatengi dzekubvisa kuCredEarn, inova inofarirwa nebasa rekambani.
Muchitsauko 11 gwaro rekubhuroka rakaiswa naCred musi waNovember 7, kambani inonzi ine pakati pemadhora makumi mashanu- $ 50 mamirioni muzvinhu asi mari inokwana $ 100- $ 100 miriyoni muzvikwereti. Izvi zvinoratidza kuti Cred anga achinetsekana mune zvemari kwechinguva asati anyorera kubhuroka.
Nekuda kweizvozvo, mari yemadhijitari wokutengesera chikuva Uphold yakagumisa hukama hwayo neCred sezvakaziviswa mu Blog romukova, Uphold akaenderera mberi achiti ivo vari kumhan'arira Cred LLC pamwe nehukama hwayo, pamwe chete nevatangi veCred nekuda kwekubiridzira, kutyora chibvumirano, uye kukuvadza mukurumbira.
Kuti uenderere mberi kubva padanho iri, Cred anonzi akachaira MACCO Kugadziridza Boka kutungamira ayo ekupa mazano emari pakuongorora mikana iripo yekubatana pamwe nekutora mikana.
KuCoin yakawana 84% yemari yakabiwa mushure mekubira kwe $ 280M, inoti yakawanikwaer
KuCoin kubvarura chinzvimbo pakati pekubiwa kukuru kwekrispto muna 2020. Kunyangwe nekubudirira mukuchengetedzwa kwekuchengetedzwa, kuchinjana kwe crypto kuchiri chinhu chakakosha chevabiridzi nevatambi vasina hunhu. Musi waSeptember 25, yakakurumbira crypto exchange yaive inonzi yakabiwa yeinofungidzirwa $ 280 mamirioni, zvichikonzera kuwanda ERC20 midziyo uye Bitcoin kubviswa kure nekuchinjana.
Mukuvandudza kuchangobva kuitika, KuCoin yakazivisa kuti ine akadzoka mari zhinji yakarasika mu $ 280 mamirioni kubiridzira chiitiko munaGunyana. CEO weKucoin, Johnny Lyu akazivisa muna Mbudzi 11 kuti kambani kusvika parizvino yakawana kusvika pamakumi masere nemasere ezviuru zvemidziyo yakabiwa mukubira kukuru.
Sekureva kwaLyu, maitiro ekudzoreredza aisanganisira "yekutevera-cheni, kuvandudza kondirakiti, uye kugadzirisa kutonga." Akaenderera zvakare achidzokorodza kuti kuchinjana mumazuva anotevera kuchaburitsa rumwe ruzivo nezvekubhadharwa kana zvese zvange zvaburwa.
Kucoin pakupedzisira anotangazve masevhisi akazara zvishoma nezvishoma, kusvika parizvino, kuchinjana kwakatangazve masevhisi akazara ekutengesa e176 kunze kweiyo yakazara 230 zvinhu zvinotengeswa kusvika nhasi. Iye CEO akacherekedza kuti masevhisi akazara ezvinhu zvakasara anovhurwa pamberi paNovember 22.
Ose maBhangi Makuru Achave Nechekuita neBitcoin, Inodaro Yakakurumbira Fund Manager Manager Mill Miller
Sezvo Bitcoin iri kuramba ichifora kuenda kunogamuchirwa nemasangano, pane chirevo chakakurumbira chekuti nekukurumidza kupfuura gare gare mabhangi anozofanira kupa mari yemari ye crypto kuti ionekwe sebhangi rakazara. Akakurumbira Fund Manager Bill Miller achangobva kuwiriranisa pfungwa dzake mune izvi.
maererano kune ane mukurumbira investor Bill Miller, makuru mabhanga, akakwira mambure akakosha makambani, dzimba dzekudyara dzichasiiwa dzisina sarudzo pane kuve nekuratidzwa kukuru kweBitcoin, uye zvichidaro zvichimbundira dhijitari.
Zvataurwa naMiller anchor pane huwandu huri kukura hwemasangano emakambani parizvino ari kuwana pachena kuBitcoin, uye nekudaro ari kuita fungidziro yekuti mamwe masangano emakambani achatevera sei. Mahofisi epamusoro akagamuchira Bitcoin muna 2020 anosanganisira Microstrategy's $ 425 mamirioni ekudyara, Paypal kuvhura iyo cryptocurrency sevhisi, uye Square's Bitcoin kudyara.
Kuburitswa kwemasangano kwakakosha kuti Bitcoin iwane kugamuchirwa kwakanyanya, uye sekutaura kwaMiller, izvo zvichangoburwa nemafemu akatogamuchira Bitcoin zvinogona kukurudzira mamwe makambani mahombe kuti aite chiito.
Kutaura nezvekukwezva kwe Bitcoin Investment, Miller akadzokorora kushomeka kweBitcoin sechikonzero chikuru nei kudiwa kuchizogara kudivi repamusoro. Bitcoin ndeye decredralized ledger protocol, iine mashoma mashoma uye inowedzera kudiwa. Kupiwa kweBitcoin kuri kuramba kuchikura padhuze ne2.5% pagore uye kunovharwa pamamirioni makumi maviri nesere ekuwanisa kweBitcoin pagore 21.
By Posted on 22 mins kare
By Posted on 24 mins kare
By Posted on 43 mins kare
The post Andreessen Horowitz Bets Big With $2.2B Crypto Fund appeared first on BeInCrypto.
By Posted on 53 mins kare
Blockchain.com inosvitsa zita rekushandisa-based crypto transaction
By Posted on 1 awa kare
Banxico surprises investors and raises its overnight interest rate by 25 basis points to 4.25%, causing the Mexican peso to rise sharply against the dollar.
About Dcity Dcity is a mathematical and trading game based on non-fungible tokens available on Hive-Engine. Players build their own cities with tokens representing buildings, citizens, technologies, and
Meya wepamberi meyaan anotungamira anovimbisa kushandura guta kuita Bitcoin hub
Eric Adams, who has outstripped the better-known crypto advocate Andrew Yang in New York City’s mayoral race, has made his own Bitcoin pledge on the eve of winning office.
By Posted on 2 maawa apfuura
'Tokenized' Tesla, Google, uye Apple zvikamu zviri kuuya kuSolana (SOL)
Dhijitari Assets AG, yeSwitzerland-yakavakirwa yakasimba inotarisana nedhizaini, chimiro, uye kuburitswa kwetokenized zvemari zviridzwa, nhasi yazivisa kuti iri kuunza yavo yakatemerwa masiteki ezvivakwa kuSolana blockchain.
Iyo posvo 'Tokenized' Tesla, Google, uye Apple migove iri kuuya kuSolana (SOL) yakatanga kutanga paCryptoSlate.
Bullish Crypto Exchange muHurumende kuti Ubatanidze neSpac
The post Bullish Crypto Exchange in Talks to Merge With SPAC appeared first on BeInCrypto.
Chirevo chitsva chinopa varidzi veEthereum, DeFi inobatsira ETH kubva mukurovera pazasi pe $ 1.7K
The post BTC, ETH, XRP, XVG, YFII, ANKR, TRX — Technical Analysis June 24 appeared first on BeInCrypto.
By Posted on 3 maawa apfuura
Asset maneja QR inotangisa Bitcoin ETF paBrazil stock exchange
1 2 ... 1,070 Next